အမျိုးသမီးများအကြားပြproblemနာအလျောက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုရှာဖွေခြင်း (2017) - Your Brain On Porn
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2017 အောက်တိုဘာ 16: 1-12 ။ Doi: 10.1556 / 2006.6.2017.063 ။
Lewczuk K သည်1, Szmyd J ကို2, Skorko M က3, Gola M က3,4.
ယခင်လေ့လာမှုများအထီးအကြားပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (PU) အတွက်ရှာကြံကုသမှုနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ပြဿနာမှ PU များအတွက်ကုသမှုကိုရှာခြင်းနှင့်ပြဿနာမှ PU နှင့်ဆက်စပ်သော variable တွေကိုနှငျ့ ပတျသကျ. Non-ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်အဘယ်သူသည်အမျိုးသမီးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်တော်မိန်းမတကာတို့ထက်ရှာကြံကုသမှုများအတွက်ခန့်မှန်းအဓိကထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆန်းစစ်နည်းလမ်းနှင့်အတူပြဿနာမှ PU နှင့်ဆက်စပ်သောအရေးပါဆောက်လုပ်ရေးအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ငါတို့သည်လည်းယောက်ျားအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်။
တစ်ဦးကစစ်တမ်းလေ့လာမှုပြဿနာမှ PU များအတွက် 719 ကုသမှုရှာဖွေနေသူအပါအဝင် 14 ပိုလန်စကားပြောကော့ကေးဆပ်အမျိုးသမီးဟောင်းနွမ်း 63-39 နှစ်ပေါင်းပေါ်တွင်ကောက်ယူခဲ့သည်။
PU နှင့်ဆက်စပ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်အပျက်သဘောလက္ခဏာတွေ: အမျှသာမှ PU ပမာဏနှင့်ကုသမှုရှာအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုကုသ-ရှာနှစျယောကျကတခြားခန့်မှန်းမိတ်ဆက်ပြီးနောက်၎င်း၏အရေးပါမှုကိုရှုံးသည်။ ဒီပုံစံယောက်ျားအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်ရရှိသောရလဒ်များကိုထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။
အထီးနမူနာအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအမျိုးသမီးတွေ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, PU ၏မျှသာငွေပမာဏပင်မှ PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေအဘို့အစာရင်းကိုင်ပြီးနောက်ကုသမှု-ရှာကြံအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါပြညွှန်။ , ထိုမှတပါး, ဘာသာရေးအမြိုးသမီးမြား၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ပြဿနာမှ PU များအတွက်ကုသမှုရှာကြံမှ PU ၏အတွေ့အကြုံရှိအနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာအားဖြင့်ဒါပေမယ့်လည်း PU နှင့်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်ချက်အားဖြင့်သာလှုံ့ဆော်ကြောင်းညွှန်ပြစေခြင်းငှါအရာ, အမျိုးသမီးအကြားရှာကြံကုသမှုသိသိသာသာခန့်မှန်းသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက်, PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေ, PU နှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုပမာဏကိုကုသမှုရှာနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သူများသည်အချက်များကုသမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
keywords: hypersexual အပြုအမူ, ကုသမှုရှာကြံ, ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ကျား, မကွဲပြားမှု, psychotherapy
လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ဇီဝဗေဒစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များအမျိုးမျိုးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အရေးကြီးဆုံးကျားဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ reactivity ကိုသူတို့ရဲ့ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်စိတ်ပညာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွာခြားCiocca et al ။ , 2015; Levin, 2005), ဦးစားပေးများနှင့်လှုပ်ရှားမှု (Hsu et al ။ , 1994; Wilson က, 1987; Wilson & Lang, 1981; Wood, McKay, Komarnicky, & Milhausen, 2016) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ကုန်း, အော်ဂဇင်နှင့် resolution ကိုအဖြစ်ဂန္လေးနှစ်ဆက်တိုက်အဆင့်ဆင့်, (ယူပါစေGeorgiadis & Kringelbach, 2012; Gola, Kowalewska, Wierzba, Wordecha, & Marchewka, 2015) ။ ဤရွေ့ကား (အတော်လေးတိကျစွာယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာကိုဖော်ပြရန်ပေမယ့်အလားတူတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာကိုဖော်ပြရန်တိုးချဲ့ခံရဖို့ခဲ့Basson, 2000, 2005) ။ ထိုမှတပါး, အထီးလိင်စိတ်နိုးထဖြစ်ပါသည် ကျား, မ-တိကျတဲ့, အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထပိုပြီးဖြစ်ဟန်သော်လည်း ကျား, မ-Non-တိကျတဲ့ (အမျိုးသမီးတွေနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ arousal တွေ့ကြုံခံစားဖို့ပိုများပါတယ်) (Huberman & Chivers, 2015; Huberman, Maracle, & Chivers, 2015) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (PU) ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားခြားနားချက်များဖေါ်ပြခြင်းသုတေသနတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိ။ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဒိန်းမတ်နမူနာအနေဖြင့်ဒေတာများအရခန့် 3.7 ကြိမ်အထီးထက်အမျိုးသမီးအကြားနည်းပါးလာပုံမှန်အစည်းအဝေး (အပတ်စဉ်အခြေခံ) ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် (18.3% vs. 67.6%) ရှိပါတယ် (Hald, 2006) ။ စကင်ဒီနေးအရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးကိုနမူနာအနေဖြင့်စုဆောင်းပိုများသောမကြာသေးမီဒေတာ (Kvalem, Træen, Lewin, & Štulhofer, 2014) အလားတူရလာဒ်များပြသ: ယောက်ျား၏ 81% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 18% အပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအလွန်ဆင်တူအချိုးအစား compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (CSBs) အတွက်ကုသမှုရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီအကြားလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်: 19.6 အမျိုးသမီးများ၏% နှင့်ယောက်ျား၏ 80.4% (လိင်သုတေသနများအတွက်ဂျာမန်လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကနေ 47 ကုသနေဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြသကဲ့သို့, Klein, Rettenberger, & Briken, 2014) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ညစ်ညမ်းမှတသက်တာထိတွေ့မှု (နော်ဝေနမူနာအတွက် 30% သာရှိပြီးပြည်ပမှ 67% အကြောင်းကို 94% အောက်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်Træen & Daneback, 2013အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနမူနာအတွက် 62.1% သာရှိပြီးပြည်ပမှ), နှင့် 93.2% (Sabina, Wolak, & Finkelhor, 2008) ။ က 11.8 လိင်ကွဲအထီးအကြား% ခဲ့သော်လည်းမကြာသေးမီသုတေသနကိုလည်း (, (ဂေးနှင့်လိင်တူချစ်သူများအကြား 23.9%) မှ PU ဖြစ်စဉ်များသာ 42.2% လိင်ကွဲအမျိုးသမီးအကြားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်ဟု (ဂေးနှင့်လိင်တူချစ်သူများအကြား 51.4%) ပြသTræen & Daneback, 2013) ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအချို့သောအမျိုးအစားခေါ်ဆောင်သွားအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု (မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏ valence အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုလည်းရှိပါတယ်Wierzba et al ။ , 2015).
သုတေသီများ (ညစ်ညမ်းအဖြစ်နညျးလမျးမြားစှာတှငျအမြိုးသမီးများအတွက်အကျိုးရှိသောဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြသLeiblum, 2001) ကအထီးအဘို့ဖြစ်၏အဖြစ် (Häggström-Nordin, Tydén, Hanson, & Larsson, 2009; Rothman, Kaczmarsky, Burke, Jansen, & Baughman, 2015), သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ရှိပေမယ့်မှ PU အချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းများအတွက်ပြဿနာအပြုအမူဖြစ်နိုင်သည်ကိုဖေါ်ပြခြင်း (Gola, Lewczuk, & Skorko, 2016; Gola & Potenza, 2016; Gola, Wordecha, et al ။ , 2017; Kraus, Martino, & Potenza, 2016; Kraus, Voon, & Potenza, 2016; ပန်းခြံ et al ။ , 2016; Potenza, Gola, Voon, Kor, & Kraus, 2017) ။ မကြာမီကလေ့လာမှုများ (Non-ကုသမှုရှာဖွေသူများအနေဖြင့်ပြဿနာမှ PU များအတွက်ကုသမှုရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီခွဲခြားကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သော့ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ထုတ်Gola et al ။ , 2016; Kraus, Martino, et al ။ , 2016) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကပြဿနာမှ PU (ကြှနျုပျတို့သညျဤအပိုင်းတွင်ထပ်မံဒီအပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြ) အကြောင်းကိုအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များပေးပေမယ့်သူတို့ရဲ့န့်အသတ်သူတို့တစ်ခုတည်းကိုသာအထီးနမူနာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီလေ့လာမှုရလဒ်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့စပ်ကြားကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏တိကျသောထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့အမျိုးသမီးနမူနာအပေါ်သီးခြားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလိုအပ်မယ့်အကျိုးဆက်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မှ PU အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲပြားခြားနားမှု၏အမျိုးသမီးမှယေဘူယျမရနိုင်ကြောင်းငြင်းခုန်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းကြောင့်အမျိုးသမီးရှာကုသမှုခန့်မှန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးယခင်သုတေသနများမရှိခြင်း၏, မရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအထီးနမူနာအပေါ်အလားတူလေ့လာမှုများအမျိုးသမီးအသစ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်အသုံးဝင်သောရည်ညွှန်းအချက်ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပြဿနာမှ PU စုံစမ်းစစ်ဆေးများအတွက် Starting Point သို့အဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဟုအထီးနမူနာပေါ်မှာငါတို့ယခင်လေ့လာမှုတစ်ခုအတိုချုပ်ဖော်ပြချက်သည်မည်, အတိအကျဤနည်း၌သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့, ဤလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောလေ့လာမှုမှာ (Gola et al ။ , 2016), ကျနော်တို့ပြဿနာမှ PU များအတွက်ကုသမှုရှာကြံ 132 လိင်ကွဲအထီးအကဲဖြတ်။ ကုသမှုမရှာတဲ့သူ 437 ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ကျနော်တို့က (နာရီ / ရက်သတ္တပတ်၏အရေအတွက်တိုင်းတာ) မှ PU ၏မျှသာငွေပမာဏကုသမှုရှာဘို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လျှင်ဖြေရှင်းရန်ရည်ရွယ်, သို့မဟုတ်ဤစပ်လျဉ်းမှ PU နှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေကကမကထပြုခဲ့လျှင် [အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲစစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်တိုင်းတာ - Revised (SAST-R)] (Carnes, အစိမ်း, & Carn, 2010; Gola, Skorko, et al ။ , 2017) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှ PU ၏မျှသာငွေပမာဏကုသမှုရှာသာကိုအားနည်းစွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်, ဤစပ်လျဉ်းအပြည့်အဝမှ PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပမာဏကိုကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဆုံးစွန်သော variable ကိုပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကုသမှုရှာကြံရန်နှင့်ဆက်စပ်သောမှ PU ၏မျှသာငွေပမာဏထက်ကြီးနှင့်ကုသမှုရှာထဲမှာကှဲလှဲ၏ 42% ကရှင်းပြသည်။ ငါတို့သည်လည်း PU ၏နှစ်ပေါင်းစတင်ခြင်းနှင့်အရေအတွက်ကိုအပါအဝင်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်ပြဿနာမှ PU များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်တွေးဆခဲ့သည်အခြား variable တွေကို, ယာနျဘာသာတရားကို, အသက်, dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာအဆင့်အတန်း (ကြည့်ရှုပုံစူးစမ်း 1 အမျိုးသမီးပြဿနာမှ PU ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ဒီမော်ဒယ်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်၏ကနဦးအပန်းဖြေအဘို့) (Gola et al ။ , 2016).
ပုံ 1။ 95% ဘက်လိုက်မှု-တညျ့ယုံကြည်မှုကြားကာလ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးစံချိန်စံညွှန်းမီလမ်းကြောင်းကိုကိန်းဖေါ်ပြခြင်းအတွက်တိုးချဲ့မော်ဒယ်၏လမ်းကြောင်းကိုဆန်းစစ် (**p ≤ .001; *p <.05) ။ သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းများတွက်ချက်ခြင်းမပြုမီကွင်းခတ်ရှိတန်ဖိုးများသည်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုများအတွက်စံသတ်မှတ်ထားသောကိန်းများဖြစ်သည်။ Bolded Arrow များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကယူဆချက်နှင့်ဆက်နွယ်သောဆက်နွယ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ကျန်လမ်းကြောင်းများသည်အလယ်အလတ်ယူဆချက်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ PU ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက် variable ကိုတစ်ခွင်၏နာမ၌။ dashed လိုင်းများအမျိုးသမီးများအတွက်မော်ဒယ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်လမ်းကြောင်းညွှန်ပြ။ တစ်ဦးချင်းစီ variable ကိုများအတွက်နမူနာအရွယ်အစားဇယားတွင်စာရင်းနေကြတယ် 1
PU အတွက်ကြီးမားသောလိင်-related ကွဲပြားခြားနားမှုစဉ်းစား, ငါတို့ဆက်ဆံရေး၏ရုပ်ပုံအမျိုးသမီးနမူနာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားကြည့်ရှုမည်ကြောင်း hypothesize ။ ပထမဦးစွာကျွန်တော်မှ PU ၏မျှသာငွေပမာဏပင်မှ PU ၏အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေအဘို့အစာရင်းကိုင်ပြီးနောက်ပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကုသမှု-ရှာကြံအပြုအမူမှဆက်စပ်ယောက်ျားထက်ဖြစ်မည်အကြောင်းစဉ်းစားပါ။ (ကအပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာမှန်မှန်အမြင်ညစ်ညမ်း (အသက်အရွယ်မရွေး 18 နှင့် 18 ကြား) အမျိုးသမီးတွေသာ 30% အဖြစ်Hald, 2006), ထိုသို့သောအပြုအမူစံတန်ဖိုးအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်ပါတယ်ဘယ်သူကိုအကြားယောက်ျား, မတူဘဲတစ် deviant အပြုအမူအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားများ၏အများစု (အသက်အရွယ်မရွေး 67.6-81 အတွက် 18% -30%) (အပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်Hald, 2006; Kvalem et al ။ , 2014) ။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤကျနော်တို့မြျှောလငျ့နိုငျအဓိကလိင်-related ကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကစက္ကန့်အရေးကြီးတဲ့ခြားနားချက်ကုသမှုရှာအပေါ်စျယာနျဘာသာတရားကို၏သက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာတော့ Martyniuk, Dekker, Sehner, ရစ်ချတာ-Appelt နှင့် Briken (2015PU ပမာဏကိုခန့်မှန်းအခါ) ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကျားမအကြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအပြန်အလှန်ပြသခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများထဲတွင်အဆင့်မြင့်စျယာနျဘာသာတရားကိုမှ PU ၏ပမာဏများကိုအဆိုးဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာက Self-ကြေညာစျယာနျဘာသာတရားကိုအပြုသဘော (အထီးအကြားမှ PU နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်Martyniuk et al ။ , 2015) ကိုလည်း (ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်လေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်အဖြစ်Gola et al ။ , 2016) ။ Grubbs, Exline, Pargament, Volk နှင့် Lindberg (2016) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများ၏ယေဘုယျလူဦးရေအတွက်ဘာသာရေးနှင့် Non-ဘာသာရေးလူတို့တွင်သို့သော်နှိုင်းယှဉ်မှ PU ၏ပမာဏ () ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအကြားပိုမိုမြင့်မားဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်သောနှင့်ညစ်ညမ်းမှ Self-ရိပ်မိစွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါပြညွှန်။ , ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့မှ PU နှင့်ဆက်စပ်သောဆိုးကျိုးလက္ခဏာတွေနှစ်ဦးစလုံးနှင့်လည်းစျယာနျဘာသာတရားကိုအမျိုးသမီးအတွက်ပြဿနာမှ PU ရှာကုသမှုသိသိသာသာခန့်မှန်းဖြစ်နိုင်သည် hypothesize ။
summation တှငျကြှနျုပျတို့ကိုဤဆောင်းပါးနှစ်ခုအဓိကရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးပြဿနာမှ PU နှင့်ဆက်စပ်သော variable တွေကိုနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးသမီးများကုသမှု-ရှာခြင်းနှင့် Non-ကုသမှု-ရှာကြံအုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးအကြားရှာကြံကုသမှုအလားအလာခန့်မှန်းအာရုံစိုက်, ပြဿနာမှ PU နှင့် ပတ်သက်. အရေးပါ variable တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုတစ်ပုံစံဖန်တီးအကဲဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကျနော်တို့ယုတ်ကုသမှုများအတွက်တန်ဖိုးများနှင့် Non-ကုသမှုရှာဖွေနေသူများရိုးရှင်းတဲ့နှိုင်းယှဉ်အပေါ်အားကိုးလို့မရဘူး - ဤနည်းလမ်းစာပေအတွက် postulated နှင့်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခံရဖို့မလိုအပ်ခဲ့ကြသောရှုပ်ထွေးသောဖျန်ဖြေစမ်းသပ်ဘို့ခွင့်ပြုမထားဘူး။ အဲဒီအစားကျနော်တို့လမ်းကြောင်းကိုဆန်းစစ်မော်ဒယ်လ်ကိုသုံးခြင်းနှင့် ( "နည်းလမ်းများ" နှင့်ထပ်မံရှင်းပြအတွက် "ရလဒ်များ" ကဏ္ဍများကိုကြည့်ပါ) ကုသမှုရှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကမှီခို variable ကိုဘယ်မှာနေတဲ့မော်ဒယ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဤအပိုငျးတှငျကြှနျုပျတို့ (က Starting Point သို့အဖြစ်ယောက်ျားဘို့ငါတို့ယခင်မော်ဒယ်ကုသGola et al ။ , 2016) ။ လာမယ့်ခြေလှမ်းအတွက်ကျနော်တို့ကအမျိုးသမီးပြဿနာမှ PU ရောင်ပြန်ဟပ်စေရန်ဤမော်ဒယ်အတွက်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို့အပွငျ "ဆွေးနွေး" အပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်အထီးပေါ်မှာဤအမျိုးသမီးနမူနာအပေါ်လေ့လာမှုနှင့်ယခင်စမ်းသပ်မှုများအကြားအဓိကသော့ချက်ကွဲပြားခြားနားမှုမီးမောင်းထိုးပြ။
အချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်းအခြေပြုစစ်တမ်းမှတစ်ဆင့်ကော့ကေးဆပ်နိုင်ငံသား၊ ပိုလန်နိုင်ငံသားများနမူနာမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မတ်လမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းကောက်ယူခဲ့သည်။ ပြPUနာရှိသော PU အတွက်ကုသမှုခံယူရန်အမျိုးသမီးများကိုလုံလောက်စွာရရှိရန် ၁၈ လနီးပါးကြာခဲ့သည် (N = 39) ။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းတွင်ပြproblemနာရှိသော PU ဟုကြေငြာသောဖောက်သည်အသစ်များကိုရည်ညွှန်းရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုထုံးဆရာ ၂၃ ဦး (စိတ်ပညာရှင် ၁၇ ယောက်၊ စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန် ၄ ယောက်နှင့်လိင်ပညာရှင် ၂ ဦး) အားကျွန်ုပ်တို့မေးမြန်းခဲ့သည်။ အလားတူကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်လေ့လာမှုမှာ (Gola et al ။ , 2016), အဓိကပါဝင်စံပြဿနာမှ PU များအတွက်ကုသမှုရှာကြံနှင့် hypersexual ရောဂါအတှကျအ4စံထဲက5တွေ့ဆုံ (အဆိုအရခဲ့ကြသည် Kafka, 2010) ။ အောက်ပါမေးခွန်းကအကဲဖြတ်အဖြစ်ဖယ်စံ, comorbid စိတ်ကြွရောဂါသို့မဟုတ်နောက်ကောက်ခဲ့ကြသည်: သင်အစဉ်အဆက်စိတ်ကြွရောဂါရောဂါခဲ့ဖူးသလော non-ကုသမှု-ရှာကြံအမျိုးသမီး (N = 676) ဆိုရှယ်မီဒီယာကြော်ငြာများမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူသောအခါဖြေကြားသူများသည်အသိပေးအကြောင်းကြားထားသောသဘောတူညီချက်သတင်းအချက်အလက်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများ၏ပျမ်းမျှအသက်မှာ ၂၆.၅ ဖြစ်သည်SD = ၅.၉၃) ၄၆၂ ဦး သည်လိင်ကွဲ၊ ၈၆ မျိုးကွဲနှင့် ၁၉ ယောက်မှာလိင်တူချစ်သူများဖြစ်သည်။ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုကို Kinsey ၏ Sexual Orientation Scale ၏ပိုလန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုဖြင့်တိုင်းတာသည်။Wierzba et al ။ , 2015) ။ ပျောက်ဆုံးနေဒေတာနှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ pairwise (ခြုံငုံတုံ့ပြန်မှုနှုန်းမှာ = 70%), တစ်ဦးချင်းစီ variable ကိုများအတွက်ပါဝင်သူတစ်ဦးအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ဆုံးအရေအတွက်ကထောက်ပံ့, ကုသမှုရှာဖွေနေသူများအုပ်စုတွင် 39 ထံမှ 15 သင်တန်းသားများအမျိုးမျိုး (စားပွဲတင်ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည် 1) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်နှငျ့ ပတျသကျ. , ကုသမှုရှာဖွေနေသူကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာအတွက်ကျနော်တို့ 17 အမျိုးသမီးများ, လိင်ကွဲရိုးရိုးအဖြစ်6နှင့်လိင်တူချစ်သူအဖြစ် 1 (အမြိုးသမီးမြားကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးနောက်ထပ် 15) အဖြစ်ကြေညာခဲ့ရသည်။ Non-ကုသမှုရှာဖွေနေသူများအုပ်စု, 444 အမျိုးသမီးတွေလိင်တူချစ်သူအဖြစ်ရိုးရိုးနှင့် 80 အဖြစ် 18, လိင်ကွဲအဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 1။ ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားများနှင့်ရာထူးနှိုင်းယှဉ်ဆိုလို (မန်း-Whitney U ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်များမှာအသုံးပြုတဲ့ variable တွေကိုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားနှင့်အတူစမ်းသပ်,), မိန်းမတို့အဘို့ (Yes / No) ရှာကြံကုသမှုပေါ် မူတည်.
variable name ကို
1 ။ အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာ (0-20) 29 589 11.34 3.99 4.71 3.15 18 20 0.081 **
2 ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု (မိနစ် / တပတ်) ၏ frequency 13 265 639.92 103.02 857.85 218.19 2,384 2,398 0.031 **
3 ။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္စျယာနျဘာသာတရားကို (0-4) 21 461 2.19 1.05 1.44 1.3344 0.027 **
4 ။ ဘာသာရေးအလေ့အကျင့် (မိနစ် / တပတ်) 15 185 339.93 87.70 298.31 95.73 1,140 540 0.115 **
5 ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှစ်ပေါင်းအရေအတွက် 22 420 10.36 9.20 6.32 6.15 25 37 0.002
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု 6.Onset (နှစ်) 21 412 17.00 17.52 8.59 5.56 35 36 0.005
7 ။ အသက်အရွယ် 39 651 27.38 26.43 8.72 5.57 27 49 0.000
8 ။ အချိန်ကနောက်ဆုံး dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (0-7) ကတည်းကကြာ 28 549 2.96 3.80 2.59 1.9877 0.006
9 ။ 1 တစ်နေ့တာအတွင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အကြီးမားဆုံးသောအရေအတွက်က 20 433 7.15 3.72 5.74 3.00 20 20 0.021 *
10 ။ ညစ်ညမ်း non-stop ကိုကြည့်၏အရှည်ဆုံးကာလ 20 433 197.05 75.40 258.75 99.15 1,199 1,199 0.088 **
မှတ်စု။ မန်း-Whitney အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်အတောအတွင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်, အုပ်စုများအကြားဂိုးသွင်း U စမ်းသပ်။ ကုသမှုနှင့် ပတ်သက်. (:; ဟုတ်ကဲ့0မျှ 1) ရှာကြံအတူ။ relationship status ကို (0: မဆက်ဆံရေးအတွက်; 1: တစ်ဆက်ဆံရေးအတွက်) χအားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ် (Yes / No) ရှာကြံကုသမှုပေါ် မူတည်. ကွဲပြားကြဘူး2 စမ်းသပ်။ χ2(1) = 1.87; p = .172; အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား: φ = 0.07 ။
*p <.05 ။ **p <.001
အားလုံးရလဒ်ကိုအစီအမံကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှု (ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့အတိအကျတူညီခဲ့ကြသည်Gola et al ။ , 2016), တစ်ဦးထက်ပိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်တွေ့နိုင်ပါသည်ရှိရာ။ အဓိကတိုင်းတာ - ကုသမှုရှာကြံ - ပြဿနာမှ PU (ထိုစစ်တမ်းမှလူနာပြခြင်းနှင့်ညွှန်ကြားသူကိုစိတ်ပညာရှင်, စိတ်ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ် sexologist နှင့်အဆက်အသွယ်) အတွက်ရှာကြံကုသမှု၏အမှန်တကယ်အပြုအမူဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များအစဉ်အဆက်သောကြောင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အကူအညီမဆိုကြင်နာကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ထိန်းချုပ်မှုရည်ရွယ်ချက်များအဘို့, Non-ကုသမှုရှာဖွေနေသူများအတွက်စစ်တမ်းအတွင်းကျနော်တို့မေးတယ်။ အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောရောဂါဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့သည်။
PU ပမာဏ မိနစ် / ရက်သတ္တပတ်၏ကြေငြာပျှမ်းမျှအရေအတွက်သည်လွန်ခဲ့သည့်လကနေစဉ်အတွင်းမှ PU သုံးစွဲအဖြစ်တိုင်းတာခဲ့သည်။ အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာ (ဟုတ်ကဲ့ / အဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်နှင့်အတူ SAST-R ကို [20 ပစ္စည်းများကိုတစ်ပိုလန်လိုက်လျောညီထွေနေဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်Gola, Skorko, et al ။ , 2017)], က) အတွက်အဆက်မပြတ်, (ခ) ကိုအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအားဖြင့် (ဂ) ဆက်ဆံရေးမျိုးနှောင့်အယှက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး (ဃ) ခံစားချက် (တိုင်းတာခြင်း။ ညစ်ညမ်းစွဲရောဂါလက္ခဏာများ၏ငုပ်လျှိုးနေဖွဲ့စည်းပုံ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်ချက်မှာမဟုတ်ခဲ့သောကြောင့်, ကျနော်တို့အနေနဲ့လေ့လာ variable ကိုအဖြစ် SAST-R မေးခွန်းလွှာအတွက်ခြုံငုံရမှတ်ကုသ။ ဒီလေ့လာမှုအတွက်မေးခွန်းလွှာ၏ပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (Cronbach ရဲ့α = .82) အလွန်မြင့်မားခဲ့သည်။
အသက်အရွယ် ဖြေဆိုသူနှစ်အတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်, PU ၏စတင်ခြင်း ဖြေဆိုသူရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုစတင်ခဲ့ရာမှာကြေညာအသက်အရွယ်အဖြစ်တိုင်းတာနှင့်ခံခဲ့ရပါတယ် PU နှစ်အရေအတွက် PU စတင်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်၏အမှန်တကယ်အသက်အရွယ်ကနေတွက်ချက်ခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္စျယာနျဘာသာတရားကို အောက်ပါမေးခွန်းတစ်ခုကိုတဆင့်0(ကျိန်းသေမျှ) နှင့်4(ကျိန်းသေဟုတ်) မှာကျောက်ဆူးနဲ့ Likert-type အမျိုးအစားစကေးအပေါ်တိုင်းတာခဲ့သည်: သင်ကိုယ်သင်မယ့်ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထည့်သွင်းစဉ်းစားသလား? ဒီစကေးအပေါ်0ထက် သာ. ကြီးမြတ်တန်ဖိုးများကိုကြေညာသူကလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုနောက်ထပ်မေးခွန်းများကိုမေးမွနျးခဲ့သညျ ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်အချိန်များ၏ကြေငြာပျှမ်းမျှသောပမာဏကိုတိုင်းတာထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုပဌနာ, ဝန်ဆောင်မှုများ / ထုံးတမ်းအတွက်ပါဝင်မှု, ဝိညာဉ်ရေးရာစာအုပ်တွေကိုဖတ်နေ, ဖျန်ဖြေခြင်း, အဖြစ်ဘာသာရေးသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးရာအလေ့အကျင့်ပေါ်တွင် (မိနစ် / တပတ်) သုံးစွဲကျနော်တို့ကိုလည်းတောင်း အချိန်ကနောက်ဆုံး dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြီးကတည်းကကြာ0 မှ ၇ သို့ပုံမှန်စံအတိုင်းအတာကို အသုံးပြု၍ (၀ - ယနေ့၊ ၁ - မနေ့၊ ၂ - နောက်ဆုံး ၃ ရက်၊ ၃ - နောက်ဆုံး ၇ ရက်၊ ၄။ နောက်ဆုံး ၃၀၊ ၅ - ၃ ၃ လ၊ ၆ - လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်၊ ၇။ အခြားသူနဲ့လိင်မဆက်ဆံဘူး။ ဘာသာရပ်များကိုတိကျသောတုံ့ပြန်မှုကိုရွေးချယ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ relationship status ကို ဆက်ဆံရေး (တရားဝင်သို့မဟုတ်အလွတ်သဘော = 1 သို့မဟုတ်မ = 0) တွင်ဖြစ်ခြင်း၏ကြေငြာအဖြစ်တိုင်းတာခဲ့သည်။ အဆိုပါ variable ကို တနေ့စဉ်အတွင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အကြီးမားဆုံးသောအရေအတွက်က တစ်ရက်တာကာလအတွင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအစီရင်ခံတင်ပြသောအများဆုံးအရေအတွက်နှင့် variable ကိုဆိုလိုသည် ညစ်ညမ်း non-stop ကိုကြည့်၏အရှည်ဆုံးကာလ (မိနစ်) စောင့်ကြည့်ညစ်ညမ်း၏ Self-အစီရင်ခံအရှည်ဆုံး, မပြတ်မတောက်ဇာတ်လမ်းတွဲဆိုလိုသညျ။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအတွက်ကျနော်တို့မန်း-Whitney ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူရှာကြံယုတ်ပြဿနာမှ PU နှင့်ဆက်စပ်သော variable တွေကိုများ၏တန်ဖိုးများနှင့်ကုသမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ U စမ်းသပ်။ ကုသမှုရှာဖွေနေသူများနှင့် Non-ကုသမှုရှာဖွေနေသူများနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောကှဲလှဲ: ကျနော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှိုင်းယှဉ်အဖွဲ့များအကြားမညီမျှမှုနမူနာအရွယ်အစား၏ဤစမ်းသပ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Next ကိုကျနော်တို့ပြဿနာမှ PU နှင့် ပတ်သက်. variable တွေကိုအကြားကျနော်တို့ရဲ့တွေးဆဆက်ဆံရေး၏အရေးပါမှုကိုစမ်းသပ်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကိုတဦးတည်းမော်ဒယ်အတွင်းမျိုးစုံ exogenous နှင့် endogenous variable တွေကိုအကြားရှုပ်ထွေး, hierarchical ဆက်ဆံရေးကိုစမ်းသပ်ဖို့ခွင့်ပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့လမ်းကြောင်းကိုဆန်းစစ်နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဤအပိုငျးတှငျကြှနျုပျတို့ကုသမှု-ရှာခြင်းနှင့် Non-ကုသမှု-ရှာကြံအုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်ပေမယ့်အဓိကမှီခို variable ကိုအဖြစ်ရှာကြံကုသမှုစဉ်းစားနှင့်၎င်း၏ခန့်မှန်းအဖြစ်ပြဿနာမှ PU နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအရေးပါသော variable တွေကိုစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ပါဘူး။ IBM က SPSS အာမုတ် (Arbuckle, 2013) နဲ့အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ variable တွေကိုအချို့ကို Non-ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်အဖြစ်ကျနော်တို့ 5,000 bootstrap ကြားမှာအတူစံချိန်စံညွှန်းမီကိန်းများ၏အရေးပါမှုကိုခန့်မှန်းခြင်းနှင့်တစ်ဦး input ကိုအဖြစ်ဆက်စပ်မှု matrix ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှု၏အရေးပါမှုကို 95% ဘက်လိုက်မှု-တညျ့ bootstrapped ယုံကြည်မှုကြားကာလ (၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူစမျးသပျခံခဲ့ရMacKinnon, 2008) ။ ကျနော်တို့တော်တော်များများကောင်းမွန်စွာထူထောင်စာရင်းဇယားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်များ၏မထိုက်မတန်၏ကျေးဇူးတော်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ A ကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်သည့်χ၏ non-သိသာထင်ရှားသောရလဒ်အားဖြင့်ညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်2 စမ်းသပ်မှုတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း (CFI) 0.95 ထက် သာ. ကြီးမြတ်တန်ဖိုးအမြစ် (0.06 ထက်နိမ့်စတုရန်းကျန်နေတဲ့ (SRMR) ကိုဆိုလိုတာအကြမ်းဖျင်း (RMSEA) 0.08 ထက်နိမ့်နှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီအမြစ်၏စတုရန်းအမှားဆိုလိုHu & Bentler, 1999).
လေ့လာမှုပစ္စည်းများနှင့် protocol ကိုစိတ်ပညာ၏ Institute ၏ Ethical ကော်မတီ, သိပ္ပံပိုလန်အကယ်ဒမီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များလေ့လာမှုအပေါင်းတို့နှင့်တကွပေးအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးခံခဲ့ရသည်။
ကျနော်တို့ပြဿနာမှ PU နှင့်ဆက်စပ်သော variable တွေကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌အမျိုးသမီးကုသမှုရှာဖွေနေသူများနှင့် Non-ကုသမှုရှာဖွေနေသူနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစတင်ခဲ့သည်။ စားပှဲ 1 မန်း-Whitney သက်ဆိုင်ရာ၏ရလဒ်များကိုပြသ U eta အားဖြင့်ညွှန်ပြအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားနှင့်အတူစမ်းသပ်မှု (ηနှစ်ထပ်2) ကိန်းနှင့်အုပ်စုနှစ်စုလုံးအတွက်အခြေခံဖော်ပြချက်များ။ ကုသမှုရှာဖွေသူများသည်ကုသမှုမခံယူသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် PU နှင့်ဆက်စပ်သည့်အနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာများနှင့် PU ပမာဏများပြားလာသည်။ ထို့အပြင် ၁ ရက်တာကာလအတွင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အရက်အလွန်အကံျွကြည့်ရှုသည့်အခြင်းအရာများတွင်ပိုမိုကြာရှည်သည့်ကုသမှုကိုရှာဖွေသူများကကြေငြာခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာကုသမှုခံယူသူများအုပ်စုသည်ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဘာသာတရားအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များရရှိခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုကုသမှု-ရှာခြင်းနှင့် Non-ကုသမှု-ရှာကြံအုပ်စုများကနောက်ဆုံး dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, အသက်, စတင်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှစ်ပေါင်းကတည်းကကြာအချိန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွဲပြားဘူးကဖော်ပြသည်။
Next ကိုကျနော်တို့ပြဿနာမှ PU နှင့်ကုသမှုလမ်းကြောင်းကိုဆန်းစစ်မော်ဒယ်များ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ, အမျိုးသမီးများရှာနှင့်ဆက်စပ်သော variable တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒီမော်ဒယ်အတွင်းစမ်းသပ်ပြီးအဆိုပါယူဆချက်ရရှိနိုင်စာပေ (အပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်Kraus, Martino, et al ။ , 2016; Kraus, Voon, et al ။ , 2016) နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးအထီးနမူနာအပေါ်ယခင်ကပို့သောအလားတူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များကို (Gola et al ။ , 2016) ။ တနည်းအားဖြင့်ဤအပိုင်းကိုအထူးသဖြင့်ကုသမှု၏အုပ်စုများအတွက် variable တွေကိုနှင့် Non-ကုသမှုရှာဖွေနေသူများယုတ်တန်ဖိုးများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မထားပါ။ အဲဒီအစား, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဤအပိုငျးတှငျအကျနော်တို့ကုသမှုရှာ၏အလားအလာခန့်မှန်းအပေါ်အထူးအလေးပေးအတူပြဿနာမှ PU နှင့်ဆက်စပ်သောအရေးပါဆောက်လုပ်ရေးအကြားဆက်ဆံရေး၏ခွန်အားစုံစမ်းစစ်ဆေး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုမော်ဒယ်များမှာအသုံးပြုတဲ့အပေါငျးတို့သ variable တွေကိုအဘို့အဆက်စပ်မှုကိန်းဇယားအတွက်တင်ပြကြသည် 2။ ကျနော်တို့ကြွင်းသောအရာများအတွက် Point-biserial Dummy-coded variable တွေကို (ကုသမှုရှာခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာအဆင့်အတန်း) ကိုဆက်စပ်ကိန်းနဲ့ Pearson ရဲ့ဆက်စပ်မှုကိန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 2။ မိန်းမတို့အဘို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထည့်သွင်းအားလုံး variable တွေကိုအဘို့အဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားများနှင့်ဆက်စပ်မှုကိန်း
1 ။ အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာ (0-20) 1
2 ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု (မိနစ် / တပတ်) ၏ frequency 0.45 ** 1
3 ။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္စျယာနျဘာသာတရားကို (0-4) 0.09 * 0.17 * 1
4 ။ ဘာသာရေးအလေ့အကျင့် (မိနစ် / တပတ်)a 0.25 ** 0.55 ** 0.28 ** 1
5 ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှစ်ပေါင်းအရေအတွက် 0.06 0.04 -0.16 * -0.06 1
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု 6.Onset (နှစ်) -0.14 * -0.12 0.17 * 0.07 -0.53 ** 1
7 ။ အသက်အရွယ် -0.01 -0.15 * -0.03 -0.06 0.46 ** 0.45 ** 1
8 ။ အချိန်ကနောက်ဆုံး dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (0-7) ကတည်းကကြာ -0.09 * 0.04 0.14 * 0.10 -0.14 * 0.09 -0.01 1
9 ။ (:; အဘယ်သူမျှမ 1 ဟုတ်ကဲ့ 0) ရှာကြံကုသမှု 0.43 ** 0.38 ** 0.17 ** 0.49 * 0.04 -0.02 0.03 0.09 * 1
10.Relationship status ကို (1: တစ်ဆက်ဆံရေးအတွက်; 0: မဆက်ဆံရေးအတွက်) -0.10 * -0.08 -0.01 -0.12 0.16 ** -0.02 0.07 -0.57 ** -0.05 1
၁ ရက်အတွင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း ၉ 0.39 ** 0.44 ** -0.06 0.28 * 0.14 * -0.07 0.02 -0.06 0.22 ** 0.01 1
10 ။ ညစ်ညမ်း non-stop ကိုကြည့်၏အရှည်ဆုံးကာလ 0.39 ** 0.67 ** 0.03 0.37 ** 0.17 * -0.18 ** -0.05 0.01 0.22 ** -0.06 0.48 **
မှတ်စု။ aဘာသာရေးအလေ့အကျင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတစ်ခုကိုသာသူတို့ကယခင်မေးခွန်းတစ်ခုကို (ပုဂ္ဂလဒိဋ္စျယာနျဘာသာတရားကို) တွင်ဘာသာရေးဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားသောသူတို့အားသင်တန်းသားများ, ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
ကျမတို့ဆီမှာအမျိုးသမီးအကြားမှ PU ပမာဏကိုပြဿနာမှ PU ရှာကုသမှုသိသိသာသာဆက်စပ်ဖြစ်မည်အကြောင်းဖျောကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကယူဆချက်တစ်ခုစာမေးပွဲနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဤအပိုငျးစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဒီဆက်ဆံရေးဟာအမှန်တကယ်သိသိသာသာခဲ့ကြောင်းပြသ (ခန့်မှန်း = 0.38 p <.001) ။
အဆိုပါတွေးဆဖျန်ဖြေ (PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာတွေပြင်းထန်မှု) မိတ်ဆက်ပြီးနောက်, PU ပမာဏနှင့်ကုသမှုအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှာကြံ၏ခွန်အားယုတ်လျော့, ဒါပေမယ့်အပြုသဘောနှင့်သိသာထင်ရှားသော [ခန့်မှန်းချက် = 0.23 (95% ဘက်လိုက်မှု-တညျ့ကြားကာလ = 0.15- ကျန်ရစ် 0.31); p <.001] ။ ဆွေးနွေးတင်ပြထားသောကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးလမ်းကြောင်းသည်အလယ်အလတ်သက်ရောက်မှုအရွယ်အစားနှင့်အတူ [0.15 (0.11–0.19)] တွင်သိသာထင်ရှားသည်။2 = 0.130 (ကအဆိုပြုထားအဖြစ် kappa နှစ်ထပ် တရားဟောဆရာ & ကယ်လီ, 2011) ။ နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုမှ PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (ပုံရှာ PU ပမာဏနှင့်ကုသမှုအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြန်ဖြေကြောင်းညွှန်ပြ 1).
လာမယ့်ခြေလှမ်းအတွက်ကျနော်တို့မှ PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာလေးခုအလားအလာခန့်မှန်း (ပုံမိတ်ဆက် 1): PU ၏နှစ်ပေါင်း (က) စတင်ခြင်းနှင့် (ခ) အရေအတွက်, (ဂ) ပုဂ္ဂလဒိဋ္စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့် (ဃ) ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှ PU သာစတင်ခြင်းကိုသိသိသာသာမှ PU [ခန့်မှန်းချက် = -0.10, (-95 မှ 0.18% ဘက်လိုက်မှု-တညျ့ကြားကာလ = -0.02) နဲ့ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုခန့်မှန်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ; p = .002] ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလည်း [-0.15 (-0.23 မှ -0.07)] အဆိုးမှ PU ၏ပမာဏနှင့်ပတ်သက်သော, အသက်သိသိသာသာခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးအဟောင်းတွေအမျိုးသမီးထက်ပိုမိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်လက်ရှိခဲ့ကြသည်သောမိန်းမတို့သည်လွန်ခဲ့သော dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြီးကတည်းကကြာနေတဲ့တိုတောင်းအချိန်ကြေငြာ; ခန့်မှန်းချက် = -0.57 (ပုံ 1) ။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့် dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြီးကတည်းကကြာအချိန်, PU ၏အသက်အရွယ်နှင့်ငွေပမာဏကိုအကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် (ခန့်မှန်း = 0.001 ဘူး p = .259; အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား: κ2 = 0.001) ။
လာမယ့်ခြေလှမ်းအတွက်ကျနော်တို့ unconstrained နှိုင်းယှဉ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်ဗားရှင်းသွေးဆောင်။ အဆိုပါ unconstrained ဗားရှင်းအားလုံးဆန်းစစ်လမ်းခရီးဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါကျပ်ဗားရှင်းမှာတော့ကျနော်တို့ (အားလုံး non-သိသိသာသာလမ်းကြောင်းပုံထဲမှာမြင်ရ0အားလုံးကို non-သိသိသာသာလမ်းကြောင်း fixed 1) ။ အဲဒီနှစျခုမော်ဒယ်များနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ (ဤလမ်းကြောင်းမော်ဒယ်မှအချက်အလက်များကိုတန်ဖိုးသိသိသာသာငွေပမာဏကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ကြတယ်Byrne, 2009) ။ ဤအချက်မှာမော်ဒယ်များ၏ unconstrained ဗားရှင်းမထိုက်မတန်ညွှန်းကိန်းခဲ့ကြသည်: χ2(34) = 2,424.45, p <.001; CFI = 0.215, RMSEA = 0.313, SRMR = 0.1733 ။ အကန့်အသတ်ရှိသောမူကွဲအတွက်χ2(39) = 2,427.63, p <.001; CFI = 0.215, RMSEA = 0.292, SRMR = 0.1749 ။ ဆွေးနွေးတင်ပြထားသောပုံစံ၏ဤမူကွဲနှစ်ခုသည်သိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိပါ2(5) = 3.179, p = .672 ။ ဤရလဒ်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံစံမှသိသာထင်ရှားသောမဟုတ်သောလမ်းကြောင်းအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ခဲ့သည်။ နောက်အဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအခြေအနေနှင့်အချိန်ကာလကြာရှည်စွာလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့သောအချိန်ကာလတို့၏လမ်းကြောင်းကိုဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ ဤလမ်းကြောင်းသည်မလိုအပ်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးယခင်မော်ဒယ်လ်၏ကျန်အဆင့်ကိုယခင်ခြေလှမ်းတွင်ဖယ်ရှားလိုက်သောသိသာထင်ရှားသောမဟုတ်သောလမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုသို့သာချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဖျက်သိမ်းထားသောလမ်းကြောင်းများအားလုံးကိုပုံတွင်ရှိသောမျဉ်းများဖြင့်မှတ်သားထားသည် 1.
ဤအချက်မှာ, မထိုက်မတန်ညွှန်းကိန်းခဲ့ကြသည်: χ2(6) = 174.20, p <.001; CFI = 0.687, RMSEA = 0.217, SRMR = 0.1231 ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မှားယွင်းသောအသက်အရွယ်နှင့် PU စတင်ဖြစ်ပေါ်မှုအကြား covariance ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရအသက်အရွယ်သည် PU စတင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (r = .45): အသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ဘ ၀ နောက်ပိုင်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤဆက်နွယ်မှုကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်မှာအတော်အတန်ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ခဲ့သည်2(4) = 11.87, p = .018; CFI = 0.985, RMSEA = 0.052, SRMR = 0.0317 ။
စံပြဒီဗားရှင်းအမျိုးသမီးအုပ်စုရှာကြံကုသမှုထဲမှာကှဲလှဲ၏ 23% ကရှင်းပြသည်။ အထီးအဘို့အလားတူမော်ဒယ်၏ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ကအများကြီးပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးကိုသောကရှင်းပြသည်ကှဲလှဲ၏ 43% အတွက်ရလဒ်Gola et al ။ , 2016) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးရေးဆွဲပြီးအယူအဆနှင့်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ (အဆိုအရGrubbs et al ။ , 2016; Martyniuk et al ။ , 2015; Štulhofer, Jurin, & Briken, 2016), ကျနော်တို့စျယာနျဘာသာတရားကိုပုံအတွက်တင်ပြအဖြစ်ကမော်ဒယ်အတွက်ရှာကြံကုသမှုတတိယခန့်မှန်းစေသည်ရာ (ရှာကြံကုသမှု၏အရေးပါသောခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်လျှင်စစျဆေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် 2) ။ ငါတို့သည်လည်း PU ၏စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ငွေပမာဏကိုအကြားဆက်ဆံရေးသည်အဘယ်အရာစစ်တယ်။
ပုံ 2။ 95% ဘက်လိုက်မှု-တညျ့ယုံကြည်မှုကြားကာလ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးစံချိန်စံညွှန်းမီလမ်းကြောင်းကိုကိန်းဖေါ်ပြခြင်းမိန်းမတို့အဘို့နောက်ဆုံးမော်ဒယ်၏လမ်းကြောင်းကိုဆန်းစစ် (**p ≤ .001; *p <.05) ။ သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းများအတွက်စာရင်းမသွင်းမီကွင်းခတ်ရှိတန်ဖိုးများသည်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုများအတွက်စံသတ်မှတ်ထားသောမြှောက်ဖော်ကိန်းများဖြစ်သည်။ ရဲရင့်သောမြှားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကုသမှုရှာဖွေခြင်းတို့၏အကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်၎င်းသည်ကြားခံလက္ခဏာများ (ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအယူအဆ၏ဘာသာရပ်) မှတစ်ဆင့်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ကျန်တဲ့လမ်းကြောင်း (မရဲရင့်တဲ့မြှား) ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယယူဆချက်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ dashed မြားသည်ဖျန်ဖြေသူသို့မဟုတ်ထပ်ဆင့်ခန့်မှန်းသူအဖြစ်ပါ ၀ င်ပြီးနောက်သိသာထင်ရှားသည့်လမ်းကြောင်းများကိုညွှန်ပြသည်။ variable တစ်ခုချင်းစီအတွက်နမူနာအရွယ်အစားများကိုဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည် 1
အဆိုပါကောက်ယူဆန်းစစ်, ခန့်မှန်းချက် = 0.40 (ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်အမြိုးသမီးမြားအဘို့အရှာကြံကုသမှုသိသိသာသာခန့်မှန်းဖြစ်သည်ထင်ရှားကြောင်းပြသ p <.001) ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကုသမှုရှာဖွေသည့်ခန့်မှန်းသူများအနက်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည် (ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အပျက်သဘောလက္ခဏာများအကြားခန့်မှန်းချက်၏အင်အားအကြားကွာခြားချက်မှာထူးခြားမှုမရှိပါ) ဆွေးနွေးထားသောခန့်မှန်းသူကိုပုံစံသို့မိတ်ဆက်ပြီးနောက်၊ PU ပမာဏနှင့်ကုသမှုရှာပုံတော်အကြားဆက်နွယ်မှုမှာသိသာထင်ရှားသောအရာမဟုတ်ပါ (ခန့်မှန်းချက် = ၀.၀၁၊ ns) ။ ဤပြောင်းလဲမှုများ၏အကျိုးဆက်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းသည်အမျိုးသမီးများအကြားရှာဖွေမှုပြုသည့်ကုသမှုတွင်ကွဲလွဲမှု၏ ၃၄% ကိုရှင်းပြကာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် PU ပမာဏအကြားဆက်စပ်မှုကိုလည်းစံပြအဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည် (ခန့်မှန်းချက် = ၀.၅၅); ဒီနောက်ထပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် PU စတင်ခြင်းနှင့် PU ပမာဏအကြား covariance ဟူသောဝေါဟာရကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဒီဆက်နွယ်မှုကအားနည်းနေတယ် (ခန့်မှန်းချက် = ၀.၁၀) ။p = .006) - အစောပိုင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ပိုများသော PU ပမာဏနှင့်ဆက်စပ်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်စံပြပုံစံ (နောက်ဆုံးပုံ) 2) တစ်ဦးကောင်းမထိုက်မတန်ခဲ့: χ2(6) = 22.387, p <.001; CFI = 0.982, RMSEA = 0.062, SRMR = 0.0283 ။
ထို့အပြင်ကျနော်တို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုး (ခန့်မှန်း = 0.55 ဆန်းစစ်; N = 89) PU နှင့်ဘာသာရေးအလေ့အထများ၏ပမာဏအကြား။ ဒီဆက်နွယ်မှုရဲ့အားသာချက်ကိုသေးငယ်တဲ့အုပ်စုငယ်တစ်ခုတည်းကသာဖန်တီးခဲ့တာပါ။n ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအလွန်များပြားသောကုသမှုခံယူသူများ (= ၆)M = ၁,၀၉၁ မိနစ် / တစ်ပတ်) နှင့်မြင့်မားသောဘာသာရေးအလေ့အထများ (M = 480.83 မိနစ် / အပတ်က) ။ ကုသမှုရှာဖွေသူများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်သောအခါဆွေးနွေးထားသည့်ဆက်နွယ်မှုသည်အရေးပါမှုကိုမရရှိခဲ့ပါ (ခန့်မှန်းချက် = ၀.၁၅၊ p = .165, N = 83) ။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ဤဆက်ဆံမှုသည်ကုသမှုမခံသောသူများအကြားသိသာထင်ရှားမှုမရှိသော်လည်းကုသမှုကိုရှာဖွေသောအုပ်စုတွင်အတော်အတန်ခိုင်မာသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရဲ့အကောင်းဆုံး, ဒီပြဿနာမှ PU နှင့်ကုသမှု-ရှာကြံအပြုအမူတွေနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များအားစုံစမ်းစစ်ဆေးပထမဦးဆုံးတစျခုအတှကျကုသမှုရှာကြံအမျိုးသမီးအပေါ်လေ့လာချက်များ၏အလွန်ကန့်သတ်အရေအတွက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သောကြောင့်အမျိုးသမီးအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုမရှိခြင်း၏, ငါတို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ရည်ညွှန်းအမှတ်အဖြစ်အထီးနမူနာပေါ်မှာငါတို့ယခင်လေ့လာမှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကပြသ၏ရလဒ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးတူညီနှင့်ယောက်ျားပေါင်းဘို့အမျိုးသမီးပြဿနာမှ PU အတွက်ရလဒ်များနှင့်ဤဘာသာရပ်အပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများအကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲပြားခြားနားမှု (Gola et al ။ , 2016; Kraus, Martino, et al ။ , 2016) ။ ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြဿနာမှ PU များအတွက်ကုသမှုရှာကြံအမျိုးသမီး Non-ကုသမှုရှာဖွေသူများထက်မှ PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမြင့်မားသောပမာဏမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ရှိသည်ပြသခဲ့သည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်ရလဒ် (ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်ရရှိသောရလဒ်များကိုစဉ်းစား, အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးGola et al ။ , 2016; Kraus, Martino, et al ။ , 2016) ။ သို့သျောလညျးကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (1 တစ်နေ့တာအတွင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ decidedly ပိုမိုမြင့်မားအများဆုံးနံပါတ်နှင့်စောင့်ကြည့် non-stop ညစ်ညမ်း၏ရှည်ဇာတ်လမ်းတွဲ) ကုသမှု-ရှာကြံအမျိုးသမီးတွေ disinhibition ၏ကာလမှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်မည်အကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ရရှိနိုင်သောစာပေတှငျကြှနျုပျတို့သူတို့ disinhibition တဲ့ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ညစ်ညမ်းရှောင်၏ကာလ, မြှင့်တင်ရန်နှင့်အလွန်အကျွံမှ PU (ဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့ကိစ္စများတွင်တင်းကျပ်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်း, ပြဿနာမှ PU အထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှာတှေ့နိုငျCarnes, 1983; Kraus, Martino, et al ။ , 2016; Wordecha, Wilk က, Kowalewska, Skorko, & Gola, 2017) ။ ဒီအနက်ကိုအတည်ပြုနဦးသက်သေအထောက်အထားကုသမှုရှာကြံရှာကြံလျက်နှင့်မအမျိုးသမီးတွေအကြားယာနျဘာသာတရားကိုအတွက်ခြားနားချက်များမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကုသမှု-ရှာကြံအုပ်စုတစ်စုတစ်ပါတ်ကာလအတွင်းပုဂ္ဂလဒိဋ္စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်၏ပျမ်းမျှပမာဏကိုနှစ်ဦးစလုံးအဘို့အမြင့်မားတန်ဖိုးများကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ကျနော်တို့ကတခြားမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုအတူကဆွေးနွေးခြင်း, အောက်ကအမျိုးသမီးပြဿနာမှ PU အတွက်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အစျယာနျဘာသာတရားကိုရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအခန်းကဏ္ဍအပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဒုတိယတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကုသမှုရှာခြင်းနှင့်ပြဿနာမှ PU နှင့်ဆက်စပ်သော variable တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေး၏စာရင်းအင်းမော်ဒယ်ပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်လိင်-related ကွဲပြားခြားနားမှုဖေါ်ပြခြင်းများစွာကိုယခင်ရလဒ်များသည်နှင့်အညီ, အမျိုးသမီးနမူနာပေါ်မှာဤလေ့လာမှုအတွက်ရရှိသောရလဒ်များသည်အထီးနမူနာအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ အမျိုးသမီးနမူနာပေါ်ရှိလက်ရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်စုစည်းတင်ပြရန်မီ, ကျနော်တို့ (အထီးပေါ်မှာငါတို့ယခင်လေ့လာမှုကနေအဓိကနိဂုံးချုပ်သတိပေးချင်ပါတယ်Gola et al ။ , 2016) ။ (က) မှ PU ၏မျှသာငွေပမာဏကိုရှာကြံကုသမှုဟာအလွန်အားနည်းခန့်မှန်းသော်လည်း (ခ) က (ထို SAST-R ဖြင့်တိုင်းတာ) အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်, ဤအချက်ကုသမှု-ရှာကြံအပြုအမူကရှင်းပြသည်: ကျနော်တို့ကပြသ ။ အကြောင်း, (ဂ) အမျိုးသားများအကြား, အသက်မှ PU နှင့် (ဃ) ၏ပမာဏနှင့်ပတ်သက်သောမဟုတ်ပါအပြင်မှ PU စတင်ခြင်းမှ PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားဘူး။ အလားတူပင်, (င) ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်၏ပမာဏ (ကုသမှုရှာမဟုတ်သလိုမှ PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းမGola et al ။ , 2016).
ကျွန်တော်တွေးဆအမျှအမျိုးသမီးများအတွက်, PU ၏မျှသာငွေပမာဏပြဿနာမှ PU ရှာကုသမှုကိုပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ PU ၏ပမာဏကိုလည်းဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှု (ပုံမှဆက်စပ်ခဲ့သည် 1), နှင့်ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုကုသမှုရှာနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။ အဆုံးစွန်သောစပ်လျဉ်းအထီး (ကြော်ငြာ။ ခ) အကြားအများကြီးအားနည်းခဲ့ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, ကွဲပြားခြားနားယောက်ျားဘို့ငါတို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကနေအမျိုးသမီးတို့တွင်မှ PU ပမာဏနှင့်ကုသမှုရှာအကြားဆက်ဆံရေးကအနုတ်လက္ခဏာတွေ၏ပြင်းထန်မှုမှတဆင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေဘို့စာရင်းကိုင်ပင်အခါ, သိသာနျြရစျ။ ဤသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းရလဒ်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်အထီးနမူနာအာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ပြဿနာမှ PU နှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကောင်းအဆုံးစွန်သောအချက်သည် non-သိသိသာသာပင်ဖြစ်သည်, (ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝအပေါ် PU ၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု၏ဒါပေမယ့်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှ PU ၏သက်သက်ပမာဏ၏မသာကုသမှုကိုရှာသောသူတို့ပြသ ) ။ ဤသည်မကြာခဏမှ PU ၏မျှသာတကယ်တော့အမျိုးသမီးအကြားပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်များဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်အကြောင်းမေးစရာများရှိနေပါသည်။ အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းပြချက်ကယောက်ျားတို့တွင်ထက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ PU လျော့နည်းစံတန်ဖိုးအပြုအမူအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏အများစုအားဖြင့်ရိပ်မိစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ယောက်ျားများထဲတွင်အပတ်စဉ်မှ PU အမျိုးသမီးအကြား, 70% အသုံးပြုမှုကိုညစ်ညမ်းထက်လျော့နည်းနေတဲ့အပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာသော်လည်းကြီးမားသောဒိန်းမတ်နှင့်စကင်ဒီနေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်း (, (80-18 ၏အသက်အရွယ်အကြားယောက်ျား၏ 30% -20% ခန့်) တစ်ဦးစံတန်ဖိုးအပြုအမူဖြစ်ဟန် လေ့လာမှုများ: Hald, 2006; Kvalem et al ။ , 2014) ။ ဤသည်ခြားနားချက်မကြာခဏမှ PU တူညီတဲ့အပြုအမူစံတန်ဖိုးအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်ပါတယ်ဘယ်သူကိုအကြားယောက်ျားမှမတူဘဲ deviant အပြုအမူအချို့ကိုကြင်နာကြောင်း (မိန်းမတကာတို့ထက်) ကယုံကြည်ချက်ပုံဖော်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ PU ၏မျှသာတကယ်တော့ကုသမှုလိုအပ်နေသည်ဟုတစ်ဦးပြဿနာအပြုအမူအဖြစ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ PU ၏အနက်ကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်, အချို့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးတွေအများစုထံမှကွဲပြားခြားနားတဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္စှဲဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအနက်ကိုမှန်လျှင်အမျိုးသမီးအကြားမှ PU နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပြဿနာများကြုံနေရ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အသိညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြောင်းကိုကိုယ်ကျင့်တရားသို့မဟုတ်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များက amplified နိုငျသညျ။ ယေဘုယျလူဦးရေအပေါ်မကြာမီကလေ့လာမှုများ (စျယာနျဘာသာတရားကို Self-ရိပ်မိ "ညစ်ညမ်းစွဲ" ကိုပိုမိုမြင့်မားသဘောထားကိုနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါပြသGrubbs et al ။ , 2016) သို့မဟုတ်မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များဖော်ပြခဲ့သည် (Štulhofer et al ။ , 2016) ။ ယာနျဘာသာတရားကို (ပုံရှာကြံကုသမှုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါတယ်လျှင်ကျနော်တို့စမ်းသပ်ပြီး 2) (ကြော်ငြာ။ င) မှာလည်း PU ပမာဏကိုရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း, ကုသမှုရှာ၏ခန့်မှန်းအဖြစ်ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်၏ပမာဏများအပါအဝင်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယောက်ျားတစ်ဦးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် Non-သိသိသာသာစဉ်အမှန်စင်စစ်, ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်၏ပမာဏ (ပြဿနာမှ PU နှင့်အတူအမျိုးသမီးအကြားကုသမှု-ရှာကြံအပြုအမူများ၏အပြင်းထန်ဆုံးခန့်မှန်း၏, Gola et al ။ , 2016) ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပုံစံသို့ဘာသာရေးအလေ့အထများမိတ်ဆက်ပြီးနောက်, မျှသာမှ PU ပမာဏနှင့်ကုသမှုအကြားဆက်ဆံရေးက၎င်း၏အရေးပါမှုကို (ပုံကိုဆုံးရှုံးရှာကြံကြောင်းပြသ 2) ။ ထိုသို့သောတွေ့ရှိချက်အမျိုးသမီးလိင်အများအားဖြင့်ယောက်ျားတို့တွင်အထက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးရှုထောင့်မှပိုပြီးဆက်စပ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းမြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများ (နှင့်အညီဖြစ်ပါသည်အဒမ် & Turner, 1985; Barry & Schlegel, 1984; Baumeister, 2000; Christensen & လက်သမား, 1962; Earle & Perricone, 1986; Ford & Norris က, 1993) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်းသောဤယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့်ပြဿနာအဖြစ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ PU ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အနက်ကိုအထောက်အကူပြုနှင့်ကုသမှုရှာမှဦးဆောင်သည်ဟုဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်မှာတော့ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်၏ပမာဏကိုလည်းညစ်ညမ်းစားသုံးမှု (ခန့်မှန်း = 0.55) အားအပြုသဘောဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤအသင်းအဖွဲ့သာကုသမှုရှာဖွေသူများအဘို့အသိသာဖြစ်ထွက်လှည့်နှင့် non-ကုသမှု-ရှာအုပျစုအတွက်သိသာထင်ရှားသောမဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောစပ်လျဉ်းသည့်လက်တွေ့အုပ်စုတစ်စုရဲ့ဝိသေသတစ်ခုဖြစ်ဟန်နှင့်အထွေထွေလူဦးရေအတွက်သေချာပေါက်လက်ဆောင်မပေးကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့် (ဘာသာရေးစံချိန်စံညွှန်းတစ်ခုအရေးပါပုံကိုထင်ဟပ်) ကိုလောင်ညစ်ညမ်းနှင့်ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်၏ပမာဏကုသမှုရှာဖွေသူများအကြားပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ ဤအရလဒ်များအတွက်တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှအနက်အချို့ကုသမှု-ရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီအဘို့, အပြုအမူ-ထောက်ပံ့ဘာသာရေးစံချိန်စံညွှန်း (ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်) တွင်အမူအကျင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပြုအမူအတွက်ယခင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဤစံနှုန်းများချိုးဖောက် (ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု) ကဖြစ်ပေါ်စေအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိဖို့ tool ကိုဖွစျစနေိုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပြုထားနိုင်နောက်ထပ်အလားအလာရှိသောယန္တရားဘာသာရေးအလေ့အကျင့်အတွက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှစ်ဦးစလုံးကုသမှုရှာဖွေနေသူကြားတွင်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ Impulses သတင်းပို့၏တိုးမြှင့်အစွမ်းသတ္တိ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုရိုးရှင်းစွာတဦးတည်းရဲ့ Impulses သတင်းပို့ဖို့အလျှော့ပေးလိုက်လျောတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပြီး, ဘာသာရေးအလေ့အထများသူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံတစ်လမ်းအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှန်ခဲ့လျှင်ဒီဆက်နွယ်မှုထိုကဲ့သို့သောမှ PU ဘို့တဏှာအဖြစ်နောက်ခံအချက်ကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ဟုပေမယ့်, PU နှင့်ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်နှစ်ခုစလုံးငွေပမာဏကိုအပြုသဘော, ဆက်နွယ်နေကြောင်းမည်ဖြစ်သည်။
ကုသမှု-ရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီအကြားမှ PU နှင့်ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်အကြားမြင့်ဆက်စပ်မှုများအတွက်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေအနက် (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်သီအိုရီ၏မထင်မှတ်ဖြစ်စဉ်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ လုပ်. ရနိုင်Wegner, 1994) ။ ပိုမိုတင်းကျပ်သော၊ ပိုမိုတင်းကျပ်သောဘာသာရေးစံနှုန်းများသည်အပြုအမူ (သို့မဟုတ်အပြုအမူနှင့်ပတ်သက်သောအတွေးများ) ကိုတားဆီးမှုမြင့်မားစေနိုင်သည် (ဥပမာ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း) ။ များစွာသောသိမြင်မှုလေ့လာမှုများမှာပြထားတဲ့အတိုင်း (ကြည့်ပါ Abramowitz, Tolin, & Street, 2001 ပြန်လည်သုံးသပ်များအတွက်) အချို့ကိစ္စများတွင်တားစီးစနစ်တစ်ခုချိုးဖောက်ကြောင်းအပြုအမူများပိုမိုမြင့်မားအကြိမ်ရေမှဦးဆောင်နေတဲ့ဝိရောဓိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာစံကိုယ်တိုင်ကပိုပြီးအဓိကလုပ်အလှည့်အတွက်စံကိုထောက်ပံ့သောအပြုအမူများ၏အဆင့်မြှင့်နိုင် - ဤကိစ္စတွင်အတွက် - ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤစံချိုးဖောက်ဆိုတင်းကျပ်သည့်ဘာသာရေးစံချိန်စံညွှန်းပြဋ္ဌာန်းအပြုအမူမျိုးနှင့်အပြုအမူတစ်ဦးချင်း၏သတိရည်ရွယ်ချက်ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုများရည်ရွယ်ခဲ့သည်ပင်အခါ, အပြန်အလှန်အထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဖိနှိပ်မှု၏ဝိရောဓိသက်ရောက်မှုအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများ (အတွေးဖိနှိပ်မှုအပေါ်များသောအားဖြင့်အာရုံစူးစိုက်ပေမယ့်Abramowitz et al ။ , 2001), ကျနော်တို့ (စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖိနှိပ်မှုဆင်တူ, သံဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်အချို့သက်သေအထောက်အထားရှိတယ်ဝက်ဘ်, မိုင်, & Sheeran, 2012) ။ ထို့အပြင်အချို့သုတေသီများထိုကဲ့သို့သော obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD အဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖိနှိပ်မှု၏ဝိရောဓိသက်ရောက်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြံပြု; Purdon, 2004), နှင့်အများအပြား Clinician (တွေ့မြင် CSBs နှင့် OCD အကြားတူညီထောက်ပြ Gola, 2016; Kor, Fogel, Reid, & Potenza, 2013 ) ပြန်လည်သုံးသပ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့အားလုံးယန္တရားများမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်အလက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုမရပါ။ သို့သော်ကျနော်တို့သူတို့ပြဿနာမှ PU များအတွက်ကုသမှုရှာဖွေသူများအကြားယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြားဆက်ဆံရေး၏သဘောသဘာဝအားရှင်းလင်းထားသည့်ရည်ရွယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုအကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ယခင်လေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်အပေါ်ချဲ့ထွင်Grubbs et al ။ , 2016; Štulhofer et al ။ , 2016) ။ အဲဒီနှစျခု variable တွေကိုအကြားကိုသာ bivariate ကြားဆက်ဆံရေးကိုသုံးသပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို (ယခင်လေ့လာမှုများကနေကောက်ချက်ကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်မေးခှနျးအတှကျဆကျဆံရေးအပြုသဘောနှင့်သိသာကြောင်းညွှန်ပြr ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်များအတွက် = .25 နှင့် r ပုဂ္ဂလဒိive္ဘာသာတရားဘာသာရေးအတွက် = .09; ဇယား 2) ။ သို့သျောလညျးမှ PU ပမာဏအနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုထပ်တိုးခန့်မှန်းအဖြစ်ထည့်သွင်းသောအခါ (ပုံရှာကြံကုသမှုတစ်ခုအစွမ်းထက်ခန့်မှန်းကျန်ရှိနေချိန်တွင်, ယာနျဘာသာတရားကိုမရှိတော့, အဆုံးစွန်သော variable ကိုဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ် 2).
ပြဿနာမှ PU ရှာအပျက်သဘောလက္ခဏာတွေနဲ့ကုသမှုစျယာနျဘာသာတရားကိုများ၏စပ်လျဉ်းကိုရည်မှတ်ရလဒ်များစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့် psychopathology ၏အခြားပုံစံများအကြားဆက်ဆံရေးများပိုမိုကျယ်ပြန်အခြေအနေတွင်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ကြသည်။ ယခင်သုတေသနများတွင်စျယာနျဘာသာတရားကို၏အဆင့်မြင့် (အပြုသဘောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့ပြသခဲ့သည်Dilmaghani, 2017; Ismail & Desmukh, 2012; Joshi, Kumari, & ဂျိန်း, 2008), ဘဝကျေနပ်မှု (Pfeifer & Waelty, 1995) နှင့်ပြောင်းပြန်လက်တွေ့လူနာ psychopathology နှင့်ဆက်စပ်သော (Gupta, Avasthi, & Kumar, 2011; Sharma က et al ။ , 2017) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အချို့သောသုတေသန (McConnell, Pergament, Ellison, & Flannelly, 2006) ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲ၏အဆင့်မြင့်ဘွဲ့အပြုသဘော psychopathology (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, phobic စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, အကြောက်လွန်ရောဂါ ideation, obsessive-compulsive နှင့် somatization) ၏အချို့သောအတိုင်းအတာဆက်နွယ်နေကြောင်းနိုင်အကြံပြုထားသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့ (ဘာသာရေးဂိုဏ်းဂဏအနည်းဆုံးအချို့ OCD လက္ခဏာတွေအဆင့်မြင့်နှင့်ဆက်စပ်နိုင်သက်သေရှိသည်ဟုAbramowitz, သင်းထောက်, ဝုဒ်, & Tolin, 2004; Gonsalvez, Hains, & Stoyles, 2010) ။ ဤသည် psychopathology အပေါ်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများ၏သက်ရောက်မှု psychopathology အမျိုးအစားနှင့်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများအားဖြင့်တည်းဖြတ်နိုင်ဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးမော်ဒယ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း, အမျိုးသမီးအကြားပြဿနာမှ PU ၏တိကျသောအမှု၌, ယာနျဘာသာတရားကို psychopathological ရောဂါလက္ခဏာတွေမှရှာကြံထက်ကုသမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပုံရသည်။ ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုဘာသာရေးယုံကြည်မှုများနှင့်ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်၏ပမာဏ၏အစွမ်းသတ္တိကိုအပြုသဘောစိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းယခင်လေ့လာမှုများ (နှင့်အညီဖြစ်ကြောင်းPickard, 2006).
စိတ်ဝင်စားစရာအမျိုးသမီးများအတွက်, အသက်အရွယ်မှ PU အတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍ; ဤအ variable တွေကိုအဘယ်သူအားမျှယောက်ျားပေါ်မှာငါတို့ယခင်လေ့လာမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောစဉ်ဤ (အဆိုပါဘာသာရပ်၏အသက်အရွယ် (ကြော်ငြာ။ က c) နှင့်မှ PU (ကြော်ငြာ။ ဃ) စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်နှစ်ဦးစလုံးလည်းပါဝင်သည်Gola et al ။ , 2016) ။ အသက်အရွယ်နုပျိုသောအမြိုးသမီးမြားကို ပို. မကြာခဏဟောင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီထက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးကြေငြာများနှင့်တစ်ဦးအငယ်အသက်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းသုံးပြီးစတင်တဲ့သူတွေကိုမှ PU နှင့်ဆက်စပ်သောအနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပိုမိုမြင့်မားပြင်းထန်မှုအစီရင်ခံရန်တော်မှာ။ ဒီတွေ့ရှိချက်များ၏ရှင်းပြချက်ကျိန်းသေနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေထိုက်တန်ပါတယ်။ ထိုသို့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနှစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့မေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းနိုင်: (Q1) အမျိုးသမီး၏အသက်ငယ်စဉ်မြေးဆက်အကြားမှ PU တိုး၏လူကြိုက်များပါသလား (Q2) ကိုအထီးဦးနှောက်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအချို့သောအမျိုးအစားများ၏အေးစက်ဖို့ပိုအားနည်းချက်အမျိုးသမီးဦးနှောက်လား?
(Q1) ကြှနျုပျတို့၏အသိပညာအရကျွန်တော်တို့ကိုဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းခွင့်ပြုမျှ longitudinal ဒေတာရှိပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေဖြင့်စိတ်ဝင်စားစရာမကြာသေးခင်ကစစ်တမ်းဒေတာ (Opinium သုတေသန 2014) အသက် ၁၈ နှစ်မှာယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေး ၉၈% အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းဟာပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြသထားတယ်။ ထိုသို့သောရလဒ်ကြောင့်မိန်းကလေးများအကြား PU သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်း (အင်တာနက်ရရှိခြင်းကြောင့်) တိုးပွားလာပြီးယောက်ျားလေးများကြားတွင်တန်းတူညီမျှမှုရှိသည်ဟုလေ့လာနိုင်သည်။ အဟောင်းလေ့လာမှုများအရ PU နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကွဲပြားမှုရှိသည်။ ဥပမာ Sabina et al ။ (2008) (အမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြား, ယောက်ျား၏ 93.2% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 62.1% Træen, Spitznogle နှင့် Beverfjord သော်လည်း, 18 များ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အစီရင်ခံ2004) နော်ဝေ၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကိုနမူနာအကြား, သူတို့ရဲ့ဘဝတစျခုလုံးကာလအတွင်းယောက်ျား၏ 87.9% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 62.9% ဟာညစ်ညမ်းမဂ္ဂဇင်းမြင်ခဲ့ပြီးသောအစီရင်ခံခဲ့သည်, 77.2 နှိုင်းယှဉ် 55%% ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း, 36.6% သာရှိပြီးပြည်ပမှသာ 8.9% ညစ်ညမ်းအပေါ်စောင့်ကြည့် အင်တာနက်။ အခြားဒေတာများကိုအမျိုးသမီးများအကြား hypersexual လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပရိုဖိုင်းကိုလည်းပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းပြောင်းလဲပြီစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Briken, Habermann, Berners နှင့်ဟေးလ် (2007) Klein et al အဖွဲ့ကကုသမှုခံယူသည့်အမျိုးသမီးများအကြားအထင်ရှားဆုံးလိင်အပြုအမူသည်အန္တရာယ်ရှိသည့်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်သည် (အမျိုးသားများအကြား - PU နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း)၊ (2014) (ထို Hypersexual အပြုအမူ Inventory မြင့်မားရမှတ်ရယူမိန်းမတကာတို့ထက်အသုံးအများဆုံးအပြုအမူအဖြစ်မှ PU အစီရင်ခံတင်ပြReid, Garos, & လက်သမား, 2011) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်မှာတော့အမျိုးသမီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးတိုးပွားလာအချိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူဆချက်ဂရုတစိုက်လေ့လာထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကုသမှု-ရှာကြံအမျိုးသမီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲမှုကြီးစိုးပုံစံများ၏ဘယ်လိုပုံစံများဆနျးစစျဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများခုနှစ်တွင် (Q2) (Grant & Dawson, 1998), ကိုအသုံးပြုခြင်းစတင်ခြင်းလက္ခဏာတွေ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအရေးပါသည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထီးပေါ်မှာငါတို့လေ့လာမှုများအတွက် (Gola et al ။ , 2016), ကျနော်တို့မှ PU စတင်ခြင်းနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောစပ်လျဉ်းကြည့်ဖို့မျှော်မှန်းထားသည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကကျွန်တော်မပေးကိုပြု၏။ သို့သော်အမျိုးသမီးအကြား, PU စတင်ခြင်းဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်မှ PU ပမာဏကိုမှသိသိသာသာဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ (အမျိုးသမီးလိင်သင်ယူခြင်းကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်Baumeister, 2000) ။ ဒီတော့လျှင်, ငယ်ရွယ်အမျိုးသမီး (Q1) ကြားတွင်မှ PU ၏လူကြိုက်များတိုးမြှင့်အကြောင်းကိုမေးခွန်း ပို. ပင်အရေးကြီးသောလေ့လာဖို့ပါလိမ့်မယ်။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြင်ပြproblemနာရှိသော PU အတွက်ကုသမှုခံယူလိုသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအချိုးအစားအချိုးအစားမညီမျှမှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အတိအကျအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့်ကုသမှုခံယူသူ ၁၃၂ ယောက်ကိုစုဆောင်းရန် ၁၂ လကြာခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်ဘာသာရပ် ၃၉ ခုကိုရှာဖွေရန် ၁၈ လလိုအပ်ခဲ့သည်။ ဤပြသမှုကယောက်ျားများသည်ပြPUနာရှိသော PU ပြofနာကြောင့်အမျိုးသမီးများထက် ၅.၀၇ ကြိမ်အကြိမ်ကုသမှုခံယူနေသည်။ ဤရလဒ်သည်ယခင် Kuzma နှင့် Black မှခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသော 12: 132 အချိုးကိုပင်ကိုယ်မူလအတည်ပြုမှုပေးသည်။2008), နှင့်တစ်ဦး4ဖေါ်ပြခြင်းယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အညီဖြစ်ပါသည်: 1 အချိုး (Briken et al ။ , 2007).
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်, တင်ပြရလဒ်များကိုကဤစံနှုန်းများကုသမှုအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ဟန်အဖြစ်ကပြဿနာမှ PU များအတွက်ကုသမှုရှာကြံအမျိုးသမီးတွေ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ညစ်ညမ်းနဲ့ဘာသာရေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်ချက်၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆွေးနွေးရန်အရေးကြီးသောကြောင်းပြသပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, ဘာသာရေး-related ယုံကြည်ချက်ကိုလည်းဆေးကုနေစဉ်တစ်ထောက်ခံအချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။ ဤကဏ်ဍဟာပိုမိုနက်ရှိုင်းဆွေးနွေးမှုထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာလက်တွေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းနေစဉ်အတွင်းဆွေးနွေးခြင်းတန်ဖိုးရှိအချက်တစ်ခုမှ PU စတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုလူတို့တွင်အမှုမဟုတ်ခဲ့သည့် (PU ၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းမိန်းမတကာတို့ထက်ပိုပြီးပြင်းထန်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းပြသ; Gola, Skorko, et al ။ , 2017) ။ PU စတင်ခြင်းမိန်းမတကာတို့ထက်ကုသမှုရလဒ်များတစ်အလားအလာခန့်မှန်းအဖြစ်လေ့လာနေကျိုးနပ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဖြစ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO သည်လက်ရှိတွင် (လာမည့် ICD-11 ခွဲခြားအတွက် CSB ရောဂါပါဝင်စဉ်းစားကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO, 2017), ကျနော်တို့ (CSB ၏လက်တွေ့ပုံထဲမှာကျားမ-related ကွဲပြားခြားနားမှုစဉ်းစားအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ကုသမှုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်အပေါ်အနာဂတ်ဆွေးနွေးမှုအကြံပြုချင်ပါတယ်Briken et al ။ , 2007; Reid, Dhuffar, Parhami, & Fong, 2012) နှင့်ကုသမှုရှာမှဦးဆောင်အချက်များ။
ပြဿနာမှ PU နှင့်အတူမိန်းမတကာတို့ထက်ရှာကြံကုသဦးဆောင်သည့်အချက်များသို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနေသော်လည်း, ဒီလေ့လာမှုဖော်ပြရကျိုးနပ်အနည်းငယ်အရေးကြီးသောန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့ကုသမှု-ရှာကြံအုပ်စုတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကိုရှိသည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသို့သော်ကုသမှု-ရှာကြံအမျိုးသမီးတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်ကစုဆောင်း, အလွန်ခက်ခဲသည်။ ကျနော်တို့ (ယခင်လေ့လာမှုများအဖြေရှာတဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်အတိုင်းဤအခက်အခဲကိုလည်းဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်ကုသမှု-ရှာကြံအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ပြုမိအနည်းငယ်လေ့လာမှုများနှင့်ကုသမှုရှာမှဦးဆောင်အချက်များအားစုံစမ်းစစ်ဆေးပထမဦးဆုံးတစျခုတစျခုဖွစျသညျရတဲ့အကြောင်းရင်းကြောင်းယုံကြည်Briken et al ။ , 2007) နှင့်ကုသမှု-ရှာကြံအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကွဲပြားခြားနားမှု (Reid et al ။ , 2012အရှက်ကွဲစေ၏) အဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ (Dhuffar & Griffiths, 2014) နှင့်ကုသမှုရဖို့အတွက်အခက်အခဲများ (Dhuffar & Griffiths, 2016) ။ ကြောင့်ဒီဝတ္ထုရှုထောင့်, ငါတို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦး type ကို 1 အမှားများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေခြီးမွှောနိုင်သည့်မျိုးဆုံးမခြင်း, apply ခဲ့ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားကိစ္စများကုသမှု-ရှာကြံအမျိုးသမီးတစ်ဦးပိုကြီးတဲ့နမူနာအပေါ်အနာဂတ်ပွားများအတွက်လိုအပ်ဖော်ပြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာလုံးဝပိုလန်အတွက်စုဆောင်းခံခဲ့ရအဖြစ်ထိုမှတပါး, ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများ၏လူဦးရေဆင်တူဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလျှောက်ထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်များ၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတိကျသောအတည်ပြုရန်ကူညီနိုင် - ရှေးရိုးစွဲနဲ့ဘာသာရေးအဖြစ်ကိုရိပ်မိနေတဲ့တိုင်းပြည်။ ကျနော်တို့အစောပိုင်းကဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, (ထိုသူတို့စျယာနျဘာသာတရားကိုအကြား) ယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့် Self-defining အဖြစ်ပြဿနာသို့မဟုတ်စံတန်ဖိုးတစ်ခု hypersexual အပြုအမူများတွင်အမျိုးသမီးများ၏အပေါ်တစ်ဦးခိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့် Self-ရိပ်မိပြဿနာဇာတ်ကောင်များအကြားတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူကြားဆက်ဆံရေးကိုလည်း (အမေရိကန်မှာပြခဲ့ပါတယ်Grubbs et al ။ , 2016) နှင့်ခရိုအရှေ (Štulhofer et al ။ , 2016) လူဦးရေ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်အဖြစ်ပြဿနာမှ PU များအတွက်ကုသမှုရှာကြံအမျိုးသမီးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကုသမှုအတွက်တစ်ဦးကိုကိုးကားအမှတ်အဖြစ်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
MG လေ့လာမှုများအတွက်ရန်ပုံငွေရရှိခဲ့သည်။ MG, KL, နဲ့ MS, ဒီဇိုင်းလေ့လာမှုထွက်သယ်ဆောင်နှင့်ကနဦး protocol ကိုရေးသားခဲ့သည်။ JS နှင့် MG စာပေရှာဖွေမှုများကိုကောက်ယူနှင့်ယခင်သုတေသနလေ့လာမှုများ၏အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်။ KL စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ MG, KL, နှင့် JS လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပထမမူကြမ်းကရေးသားခဲ့သည်။ အားလုံးစာရေးဆရာများမှလှူဒါန်းခဲ့နှင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏နောက်ဆုံး version ကိုအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ အားလုံးစာရေးဆရာများလေ့လာမှုအားလုံးကိုဒေတာမှအပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်ခဲ့များနှင့်ဒေတာများ၏သမာဓိနှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုများအတွက်တာဝန်ယူပါ။
အဆိုပါစာရေးဆရာများအားလုံး psychotherapists, sexologists, ငါတို့ကအင်တာနက်စစ်တမ်းများမှသူတို့ရဲ့လူနာများကိုညွှန်ကြားသူကိုစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, အထူးသဖြင့်ဒေါက်တာမိခါလသည် Lew-Starowicz ဒေါက်တာPaweł hola, Dorota လျဘာဒံယေလ Cysarz, ဟန္န Santura နှင့် Ogrody ၏အဖွဲ့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် Zmian (www.ogrodyzmian.pl) ။ သူတို့ကအစများအဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် www.onanizm.pl ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေမြှင့်တင်ပါ။
Abramowitz, ဂျေအက်စ်, သင်းထောက်, ခဂျေ, ဝုဒ်, C. အမ်, & Tolin, D. အက်ဖ် (2004) ။ ပရိုတက်စတင့်ဘာသာရေးနှင့်စွဲစွဲလမ်းစေသောလက္ခဏာများနှင့်သိမြင်မှုများအကြားဆက်စပ်မှု။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်စိတ်, 20 (2), 70-76 ။ Doi:https://doi.org/10.1002/da.20021 Crossref, Medline
Abramowitz, ဂျေအက်စ်, Tolin, D. အက်ဖ်, & လမ်း, G. အ P. (2001) ။ အတွေးဖိနှိပ်မှု၏ဝိရောဓိသက်ရောက်မှု: ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည်။ လက်တွေ့စိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 21 (5), 683-703 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/S0272-7358(00)00057-X Crossref, Medline
အဒမ်, C တို့, & Turner, ခ (1985) ။ ငယ်ရွယ်သောအရွယ်မှသည်အိုမင်းခြင်းအထိလိင်ပြောင်းလဲမှုသတင်းများရရှိသည်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 21 (2), 126-141 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224498509551254 Crossref
Arbuckle, ဂျေအယ်လ် (2013) ။ IBM SPSS Amos 22 အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်။ အာမုတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်း။ မှရယူရန် http://www.sussex.ac.uk/its/pdfs/SPSS_Amos_User_Guide_22.pdf
Barry, အိပ်ချ်, & Schlegel, အေ (1984) ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စံနမူနာအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏တိုင်းတာ။ Ethnology, 23 (4), 315-329 ။ Doi:https://doi.org/10.2307/3773508 Crossref
Basson, R. (2000) ။ အဆိုပါအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု: တစ် ဦး ကကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 26 (1), 51-65 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/009262300278641 Crossref, Medline
Basson, R. (2005) ။ အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: Revised နှင့်တိုးချဲ့အဓိပ္ပာယ်။ ကနေဒါ Medical Association Journal မှ, 172 (10), 1327-1333 ။ Doi:https://doi.org/10.1503/cmaj.1020174 Crossref
Baumeister, R. အက်ဖ် (2000) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာပလတ်စတစ်ကွဲပြားခြင်း - ကျား၊ မကွဲပြားမှု - အမျိုးသမီးလိင်သည်လူမှုရေးအရပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 126 (3), 347-374 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.3.347 Crossref, Medline
Briken, P. , Habermann, N. , Berner, W. , & Hill, A. (2007) ။ လိင်စွဲလမ်းမှုကိုရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသခြင်း - ဂျာမန်လိင်ကုသသူများအကြားစစ်တမ်းတစ်ခု။ လိင်စွဲ & compulsivity, 14 (2), 131-143 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160701310450 Crossref
Byrne, ခအမ် (2009) ။ AMOS နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းပုံစံ။ အခြေခံသဘောတရားများ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့်ပရိုဂရမ်များ (2nd ed ။ ) ။ နယူးယောက်, NY: Routledge ။
Carnes, P. (1983) ။ မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲက: နားလည်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ။ Minneapolis, MN: CompCare ။
Carnes, P. , အစိမ်းရောင်, ခ, & Carnes, အက်စ် (2010) ။ အတူတူပင်ကွဲပြားခြားနား: လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်ရန်လိင်စွဲစိစစ်ရေးစမ်းသပ်မှု (SAST) ကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်ခြင်း။ လိင်စွဲမှုနှင့်ထိုးစစ်များ၊ ၁၇ (၁)၊ ၇-၃၀ ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720161003604087 Crossref
Christensen, အိပ်ချ်, & လက်သမား, G. အ (1962) ။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုသုံးခုတွင်လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တန်ဖိုး - အပြုအမူကွာဟချက်များ။ အမေရိကန်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 27 (1), 66-74 ။ မှရယူရန် http://www.jstor.org/stable/2089719
Ciocca, G. အ, Limoncin, အီး, Di Tommaso, အက်စ်, Mollaioli, D. , Gravina, GL, Marcozzi, အေ, Tullii, အေ, Carosa, အီး, Di Sante, အက်စ်, Gianfrilli, D. , Lenzi, အေ, & Jannini, EA (2015) ။ ပူးတွဲပါပုံစံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများလိင်အကြောင်းလေ့လာမှုကိုလေ့လာခြင်း။ ခွန်အားမရှိခြင်းသုတေသနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 27 (3), 81-85 ။ Doi:https://doi.org/10.1038/ijir.2014.33 Crossref, Medline
Dhuffar, အမ်, & Griffiths က, အမ် (2014) ။ ရှက်ခြင်း၏အခန်းကဏ္ hyp နှင့်အမျိုးသမီး hypersexual အပြုအမူများတွင်၎င်း၏အကျိုးဆက်များကိုနားလည်ခြင်း - ရှေ့ပြေးလေ့လာမှုတစ်ခု။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,3(4), 231-237 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/JBA.3.2014.4.4 လင့်ခ်
Dhuffar, အမ်ကေ, & Griffiths က, အမ် ((2016) ။ ယူကေတွင်အမျိုးသမီးများလိင်စွဲလမ်းမှုကုသမှုကိုအတားအဆီးဖြစ်စေသည်။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,5(4), 562-567 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.072 လင့်ခ်
Dilmaghani, အမ် (2017) ။ ကနေဒါဘာသာရေးသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး၏အရေးပါမှု။ ဘာသာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေတိုး။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10943-017-0385-1 Crossref, Medline
Earle, ဂျေ, & Perricone, P. (1986) ။ လက်မထပ်မီလိင်မှု - တက္ကသိုလ်နယ်မြေငယ်တစ်ခု၏သဘောထားနှင့်အပြုအမူများကိုဆယ်နှစ်လေ့လာခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 22 (3), 304-310 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224498609551310 Crossref
Ford ကား, K. , & Norris က, အေ (1993) ။ မြို့ပြဟစ်စပန်းနစ်မြီးကောင်ပေါက်များနှင့်လူငယ်လူရွယ်များ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောဆက်ဆံမှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 30 (4), 316-323 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224499309551718 Crossref
Georgiadis, ဂျေ R. , & Kringelbach, အမ်အယ်လ် (2012) ။ လူ့လိင်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာ - လိင်မှုကိုအခြားအပျော်အပါးများနှင့်ဆက်နွယ်သော ဦး နှောက်ပုံရိပ်အထောက်အထား။ Neurobiology, 98 (1), 49-81 အတွက်တိုးတက်မှု။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2012.05.004 Crossref, Medline
Gola, အမ် (2016) ။ mechanisms မဟုတ်ဘဲမျှသာလက္ခဏာတွေ: hypersexual အပြုအမူများအတွက်ကုသမှုရှာသောလူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဘို့သိကောင်းစရာများ။ အဆိုပါလက်တွေ့နှင့် neuroscience ရှုထောင့်ကနေ။ Przegląd Seksuologiczny,2(46), 2-18 ။
Gola, အမ်, Kowalewska, အီး, Wierzba, အမ်, Wordecha, အမ်, & Marchewka, အေ (2015) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Arousability Inventory SAI-PL ၏ပိုလန်လိုက်လျောညီထွေမှုနှင့်အထီးအဘို့အအတည်ပြု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 12, 245-254 ။
Gola, အမ်, Lewczuk, K. , & Skorko, အမ် (2016) ။ အဘယ်အရာကအရေးကြီးသည် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပမာဏ၏ပမာဏသို့မဟုတ်အရည်အသွေးသည်။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုရှာဖွေရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်များ။ လိင်ဆေးပညာဂျာနယ်, 13 (5), 815-824 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.02.169 Crossref, Medline
Gola, အမ်, & Potenza, အမ် N. (2016) ။ ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကို Paroxetine ကုသမှု - အဖြစ်အပျက်စီးရီး။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,5(3), 529-532 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.046 လင့်ခ်
Gola, အမ်, Skorko, အမ်, Kowalewska, အီး, Kołodziej, အေ, Sikora, အမ်, Wodyk, အမ်, Wodyk, Z. , & Dobrowolski, P. (2017) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲစိစစ်စမ်းသပ်မှု၏ပိုလန်လိုက်လျောညီထွေ - Revised ။ ပိုလန်စိတ်ရောဂါကုသမှု, 51 (1), 95-115 ။ Doi:https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/61414 Crossref, Medline
Gola, အမ်, Wordecha, အမ်, Sescousse, G. အ, Lew-Starowicz, အမ်, Kossowski, ခ, Wypych, အမ်, Makeig, အက်စ်, Potenza, အမ် N. , & Marchewka, အေ (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်စွဲလမ်းစေနိုင်သလော။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုခံယူလိုသောအမျိုးသားများအတွက် fMRI လေ့လာချက်။ Neuropsychopharmacology, 42 (10), 2021-2031 ။ Doi:https://doi.org/10.1038/npp.2017.78 Crossref, Medline
Gonsalvez, C. ဂျေ, Hains, အေ R. , & Stoyles, G. အ (2010) ။ ဘာသာတရားနှင့် obsessive ဖြစ်ရပ်များအကြားဆက်ဆံရေး။ စိတ်ပညာ၏သြစတြေးလျဂျာနယ်, 62 (2), 93-102 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00049530902887859 Crossref
Grant, ခအက်ဖ်, & Dawson, A. အေ (1998) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးစတင်သုံးစွဲချိန်နှင့် DSM-IV မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခိုမှုနှင့်ဆက်စပ်မှု။ အမျိုးသား longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey မှရလဒ်များ။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှု၏ဂျာနယ်, 10 (2), 163-173 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/S0899-3289(99)80131-X Crossref, Medline
Grubbs, ဂျေခ, Exline, ဂျေဂျေ, Pargament, K. ဗြဲ, Volk, အက်ဖ်, & Lindberg, အမ်ဂျေ (2016) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်ဘာသာရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 46 (6), 1733-1745 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-016-0772-9 Crossref, Medline
Gupta, အက်စ်, Avasthi, အေ, & Kumar က, အက်စ် (2011) ။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ဘာသာတရားနှင့်စိတ်ပညာအကြားဆက်ဆံရေး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အိန္ဒိယဂျာနယ်, 53 (4), 330-335 ။ Doi:https://doi.org/10.4103/0019-5545.91907 Crossref, Medline
Häggström-Nordin, အီး, Tydén, တီ, Hanson, U. , & Larsson, အမ် (2009) ။ ဆွီဒင်အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံများနှင့်သဘောထား။ သန္ဓေတားခြင်းနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ဥရောပဂျာနယ်, 14 (4), 277-284 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/13625180903028171 Crossref, Medline
Hald, G. အအမ် (2006) ။ ငယ်ရွယ်သောလိင်ကွဲလိင်ကွဲအရွယ်ရောက်သူများအကြားညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းသုံးစွဲမှု၌ကျား၊ မကွဲပြားမှုရှိသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 35 (5), 577-585 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-006-9064-0 Crossref, Medline
Hsu, ခ, Kling, အေ, Kessler, C တို့, Knapke, K. , Diefenbach, P. , & as လိယ, ဂျေအီး (1994) ။ ကောလိပ်လူ ဦး ရေတွင်လိင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကျား၊ မကွဲပြားမှုများ - ဆယ်နှစ်ပုံတူပွားခြင်း။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 20 (2), 103-118 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00926239408403421 Crossref, Medline
ဟူ, အယ်လ်တီ, & Bentler, P. အမ် (1999) ။ covariance ဖွဲ့စည်းပုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်းများအတွက် Cutoff စံ: အသစ်ကအခြားနည်းလမ်းနှိုင်းယှဉ်သမားရိုးကျစံ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းပုံစံ: တစ် ဦး က Multidisciplinary ဂျာနယ်,6(1), 1-55 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10705519909540118 Crossref
Huberman, ဂျေအက်စ်, & Chivers, အမ်အယ်လ် (2015) ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း thermography နှင့် plethysmography နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏ကျား, မတိကျတဲ့ဆန်းစစ်။ Psychophysiology, 52 (10), 1382-1395 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/psyp.12466 Crossref, Medline
Huberman, ဂျေအက်စ်, Maracle က, အေစီ, & Chivers, အမ်အယ်လ် (2015) ။ လိင်နှင့်ဆိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်ကျား၊ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 52 (9), 983-995 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224499.2014.951424 Crossref, Medline
Ismail, Z. , & Desmukh, အက်စ် (2012) ။ ဘာသာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ။ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုသိပ္ပံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်,3(11), 20-28 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00207590701700529
Joshi, အက်စ်, Kumari က, အက်စ်, & ဂျိန်း, အမ် (2008) ။ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်မှု။ အသုံးချစိတ်ပညာ၏အိန္ဒိယအကယ်ဒမီဂျာနယ်, 34 (2), 345-354 ။
Kafka, အမ်ပီ (2010) ။ Hypersexual Disorder: DSM-V အတွက်အဆိုပြုထားတဲ့ရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 39 (2), 377-400 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-009-9574-7 Crossref, Medline
Klein, V. , Rettenberger, အမ်, & Briken, P. (2014) ။ Self- အစီရင်ခံ hypersexuality ၏ညွှန်းကိန်းများနှင့်အမျိုးသမီးအွန်လိုင်းနမူနာအတွက်၎င်း၏ဆက်စပ်မှု။ လိင်ဆေးပညာဂျာနယ်, 11 (8), 1974-1981 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/jsm.12602 Crossref, Medline
Kor, အေ, Fogel, Y. အေ, Reid, R. C. , & Potenza, အမ် N. (2013) ။ hypersexual Disorder ကိုစွဲလမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သလား။ လိင်စွဲမှုနှင့်ထိုးစစ်များ၊ ၂၀ (၁-၂)၊ ၂၇-၄၇ ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2013.768132
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, Martino, အက်စ်, & Potenza, အမ် N. (2016) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုရန်ကုသမှုခံယူလိုသောအမျိုးသားများ၏လက်တွေ့လက္ခဏာများ။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,5(2), 169-178 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.036 လင့်ခ်
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, Voon, V. , & Potenza, အမ် N. (2016) ။ compulsive လိင်အပြုအမူတစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလဲ စွဲ, 111 (12), 2097-2106 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/add.13297 Crossref, Medline
Kuzma, ဂျေအမ်, & က Black, W. ဒဗလျူ (2008) ။ ကူးစက်ရောဂါ၊ ပျံ့နှံ့မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာသဘာဝသမိုင်း။ မြောက်အမေရိက၏စိတ်ရောဂါဆေးခန်း, 31 (4), 603-611 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.psc.2008.06.005 Crossref, Medline
Kvalem, ဗြဲအယ်လ်, Træen, ခ, Lewin, ခ, & Štulhofer, အေ (2014) ။ ငယ်ရွယ်သောစကင်ဒီနေးဗီးယားလူကြီးများအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါရုပ်သွင်ပြင်ကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၏ကိုယ်ပိုင်အမြင် Cyberpsychology: ဆိုက်ဘာအာကာသဆိုင်ရာစိတ်ပညာဆိုင်ရာသုတေသနဂျာနယ်၊ ၈ (၄)၊ ဆောင်းပါး ၄ ။https://doi.org/10.5817/CP2014-4-4 Crossref
Leiblum, အက်စ် R. (2001) ။ အမျိုးသမီးများ၊ လိင်နှင့်အင်တာနက်။ လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကုထုံး, 16 (4), 389-405 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/14681990126954 Crossref
Levin, R. ဂျေ (2005) ။ လိင်မှုနှိုးဆွမှု - လူသားမျိုးပွားခြင်းတွင်၎င်း၏ဇီဝကမ္မအခန်းကဏ္။ ။ လိင်သုတေသန၏နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ချက်, 16 (1), 154-189 ။ Medline
MacKinnon, P. P. (2008) ။ စာရင်းအင်းဖျန်ဖြေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိဒါန်း။ နယူးယောက်, NY: Routledge ။
Martyniuk, U. , Dekker, အေ, Sehner, အက်စ်, Richter-Appelt, အိပ်ချ်, & Briken, P. (2015) ။ ဘာသာရေး၊ လိင်ဆိုင်ရာဒဏ္,ာရီများ၊ လိင်မညီညွတ်မှုများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - ပိုလန်နှင့်ဂျာမန်တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Cyberpsychology: ဆိုက်ဘာအာကာသဆိုင်ရာစိတ်ပညာသုတေသနဂျာနယ်၊ ၉ (၂)၊ ဆောင်းပါး ၄ ။https://doi.org/10.5817/CP2015-2-4 Crossref
McConnell, K. , Pergament, K. ဗြဲ, Ellison, C. G. , & Flannelly, K. J. (2006) ။ အမျိုးသားနမူနာတစ်ခုတွင် ၀ ိညာဉ်ရေးရာရုန်းကန်မှုများနှင့်စိတ်ပညာရောဂါလက္ခဏာများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဆန်းစစ်ခြင်း။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 62 (12), 1469-1484 ။ Doi:https://doi.org/10.1002/jclp.20325 Crossref, Medline
Opinium သုတေသန။ (2014) ။ 500 အသက်ဗြိတိန်လူကြီးများအကြား 18 အွန်လိုင်းအင်တာဗျူး။ လန်ဒန်, ဗြိတိန်: ပြည်သူ့ပေါ်လစီသုတေသနအင်စတီကျု။ ရယူရန်ဖေဖော်ဝါရီလ 3, 2017 မှ http://www.ippr.org/assets/media/publications/attachments/OP4391-IPPR-Data-Tables.pdf
ပန်းခြံ, ခ Y. , Wilson က, G. အ, ဘာဂါ, ဂျေ, Christman, အမ်, Reina, ခ, ဆရာတော်, အက်ဖ်, Klam, ဒဗလျူပီ, & Doan, အေပီ (2016) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်လပ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသလား လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ် ဦး ကပြန်လည်သုံးသပ်။ အပြုအမူသိပ္ပံ,6(3), 17 Doi:https://doi.org/10.3390/bs6030017 Crossref
Pfeifer, အက်စ်, & Waelty, U. (1995) ။ စိတ်ပညာနှင့်ဘာသာရေးကတိက ၀ တ်ပြုမှု - ထိန်းချုပ်ထားသည့်လေ့လာမှု။ စိတ်ပညာ, 28 (2), 70-77 ။ Doi:https://doi.org/10.1159/000284903 Crossref, Medline
Pickard, ဂျေဂျီ (2006) ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏စိတ်ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘာသာရေးနှင့်ဆက်စပ်မှု။ အိုမင်းခြင်းနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး, 10 (3), 290-297 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/13607860500409641 Crossref, Medline
Potenza, အမ် N. , Gola, အမ်, Voon, V. , Kor, အေ, & Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ (2017) ။ အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲရောဂါလား? အဆိုပါ Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု,4(9), 663-664 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30316-4 Crossref, Medline
တရားဟောဆရာ, K. ဂျေ, & ကယ်လီ, K. (2011) ။ ဖျန်ဖြေခြင်းပုံစံများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားတိုင်းတာမှုများ - သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုများကိုဆက်သွယ်ရာတွင်အရေအတွက်နည်းဗျူဟာများ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ, 16 (2), 93-115 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/a0022658 Crossref, Medline
Purdon, C. (2004) ။ OCD အတွက်အတွေးဖိနှိပ်မှု၏ပင်ကိုယ်မူလစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ။ အပြုအမူကုထုံးနှင့်စမ်းသပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု, 35 (2), 121-136 ၏ဂျာနယ်။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2004.04.004 Crossref, Medline
ရိဒ်, R. C. , Dhuffar, အမ်ကေ, Parhami, ဗြဲ, & Fong, တီဒဗလျူ (2012) ။ hypersexual ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ hypersexual အမျိုးသမီးတစ် ဦး လူနာနမူနာအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ရှုထောင့်ရှာဖွေစူးစမ်း။ စိတ်ရောဂါအလေ့အကျင့်၏ဂျာနယ်, 18 (4), 262-268 ။ Doi:https://doi.org/10.1097/01.pra.0000416016.37968.eb Crossref, Medline
ရိဒ်, R. C. , Garos, အက်စ်, & လက်သမား, ခ N. (2011) ။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ကိုအမျိုးသားများ၏အပြင်လူနာနမူနာတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ လိင်စွဲ & မငြိမ်မသက်, 18 (1), 30-51 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2011.555709 Crossref
Rothman, အီးအက်ဖ်, Kaczmarsky, C တို့, Burke က, N. , Jansen, အီး, & Baughman, အေ (2015) ။ “ porn မပါဘဲ…အခုငါသိတဲ့တစ်ဝက်လောက်ကိုငါမသိသေးဘူး” - မြို့ပြ၊ ဝင်ငွေနည်းသော၊ အနက်ရောင်နှင့်ဟစ်စပန်းနစ်လူငယ်များအကြားတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ အရည်အသွေးလေ့လာမှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 52 (7), 736-746 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224499.2014.960908 Crossref, Medline
Sabina, C တို့, Wolak, ဂျေ, & Finkelhor, D. (2008) ။ လူငယ်များအတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သဘာဝနှင့်ဒိုင်းနမစ်။ CyberPsychology & အပြုအမူ, 11 (6), 691-693 ။ Doi:https://doi.org/10.1089/cpb.2007.0179 Crossref, Medline
Sharma က V. , Marin, D. ခ, Koenig, အိပ်ချ်ကေ, Feder, အေ, Iacoviello, ခအမ်, Southwick, အက်စ်အမ်, & Pietrzak, R. အိပ်ချ် (2017) ။ အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၏ဘာသာရေး၊ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး - စစ်ပြန်များ၏အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့်ခံနိုင်ရည်လေ့လာမှုမှရလဒ်များ။ ထိရောက်သော Disorders ၏ဂျာနယ်, 217, 197-204 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.03.071 Crossref, Medline
Štulhofer, အေ, Jurin, တီ, & Briken, P. (2016) ။ မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည်အထီး hypersexuality ၏အသွင်အပြင်တစ်ခုလား? အွန်လိုင်းလေ့လာမှုမှရလာဒ်များ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 42 (8), 665-680 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/0092623X.2015.1113585 Crossref, Medline
Træen, ခ, & Daneback, K. (2013) ။ မတူညီသောလိင်ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုရှိသောနော်ဝေအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်အပြုအမူများအသုံးပြုမှု Sexologies, 22 (2), e41-e48 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.sexol.2012.03.001 Crossref
Træen, ခ, Spitznogle, K. , & Beverfjord, အေ (2004) ။ နော်ဝေလူ ဦး ရေတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏သဘောထားများနှင့်အသုံးပြုမှု ၂၀၀၂ ။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်၊ ၄၁ (၂)၊ ၁၉၃–၂၀၀ ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224490409552227 Crossref, Medline
ဝက်ဘ်, T. L. , မိုင်, အီး, & Sheeran, P. (2012) ။ ခံစားမှုနှင့်ဆက်ဆံခြင်း: စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းများ၏လုပ်ငန်းစဉ်ပုံစံမှဆင်းသက်လာသည့်မဟာဗျူဟာများ၏ထိရောက်မှုကို meta-analysis သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 138 (4), 775-808 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/a0027600 Crossref, Medline
Wegner, D. အမ် (1994) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု၏အီလက်ထရောနစ်ဖြစ်စဉ်များ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 101 (1), 34-52 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/0033-295X.101.1.34 Crossref, Medline
Wierzba, အမ်, Riegel, အမ်, Pucz, အေ, Leśniewska, Z. , Dragan, ဒဗလျူŁ။ , Gola, အမ်, Jednoróg, K. , & Marchewka, အေ (2015) ။ Nencki ထိရောက်သောရုပ်ပုံစနစ် (NAPS ERO) အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ စိတ်ပညာနယ်နိမိတ်၊ ၆၊ ၁၃၃၆။ Doi -https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01336 Crossref, Medline
Wilson က, G. အ D. (1987) ။ လိင်မှုကိစ္စ၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းတွင်ယောက်ျား - မိန်းမကွဲပြားခြားနားမှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ် ဦး ချင်းကွာခြားချက်များ, 8 (1), 125-127 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/0191-8869(87)90019-5 Crossref
Wilson က, G. အ,, & Lang, R. ဂျေ (1981) ။ လိင်စိတ်ကူးယဉ်ပုံစံများတွင်လိင်ကွဲပြားမှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ် ဦး ချင်းကွာခြားချက်များ,2(4), 343-346 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/0191-8869(81)90093-3 Crossref
Wood က, ဂျေ R. , McKay, အေ, Komarnicky, တီ, & Milhausen, R. R. (2016) ။ မင်းတို့အတွက်ကောကောင်းလား။ ကျား၊ မလိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာကနေဒါတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအကြားပါးစပ်လိင်အလေ့အကျင့်များနှင့်အပျော်အပါးသတ်မှတ်ချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း လူ့လိင်၏ကနေဒါဂျာနယ်, 25 (1), 21-29 ။ Doi:https://doi.org/10.3138/cjhs.251-A2 Crossref
Wordecha, အမ်, Wilk က, အမ်, Kowalewska, အီး, Skorko, အမ်, & Gola, အမ် (2017) ။ OP-125: အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ကုသမှုခံယူလိုသောအမျိုးသားများအကြားလက်တွေ့မတူကွဲပြားမှု။ 10 ပတ်ကြာဒိုင်ယာရီအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်နောက်ခံအရည်အသွေးလေ့လာမှု။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,6(S1), 60-61 ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ (2017) ။ ICD-11 (Beta ကိုမူကြမ်း) - compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ။ မှရယူရန် http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/f/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1630268048